January 2018 - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
သဘာဝအတိုင်း ကလေးမွေးဖို့ လှုံ့ဆော်ရာမှာ ဘယ်နည်းက အကောင်းဆုံးလဲ ?
Eclampsia ကိုယ်ဝန် ဆောင်စဉ် သွေးတိုးရှိတဲ့အမျိုးသမီး တွေမှာ တက်တဲ့ဝေဒနာကို ခံစားရတဲ့ အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်စဉ် အမျိုးသမီး ၆၂ç ၀၀၀ မှ ၇၇ç ၀၀၀ ခန့်ဟာ ကိုယ်ဝန်ဆိပ်တက်ခြင်းနဲ့ ပဏာမ ကိုယ်ဝန်ဆိပ်တက်သည့် အခြေအနေ Pre- Eclampsia တို့ကြောင့် သေဆုံးလျက်ရှိပါတယ်။ ပဏာမ ကိုယ်ဝန်ဆိပ်တက်သည့် အခြေအနေမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သွေးတိုးခြင်း၊ ဆီးထဲမှာ ပရိုတင်းတွေ များစွာပါခြင်းနဲ့ အခြားကိုယ်တွင်း အင်္ဂါတွေ ပုံမှန်အလုပ်မလုပ်ခြင်း စတဲ့ လက္ခဏာတွေပြလေ့ရှိပါတယ်။ တက်တဲ့လက္ခဏာကိုတော့ မမွေးမီ၊ မွေးစဉ်နဲ့ မွေးပြီးအချိန်တိုင်းမှာ အချိန်မရွေး ကြုံရနိုင်ပါတယ်။ ယင်း အခြေအနေမှာ အရေးပေါ်မွေးဖွားဖို့ (သဘာဝအတိုင်း မွေးနိုင်လေ ကောင်းလေ)က မိခင်နဲ့ ကလေး နှစ်ဦးစလုံးရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် အရေးကြီးပါတယ်။
လီဗာပူးတက္က သိုလ်မှ သုတေသီတွေကမီးဖွားနိုင် ရန် လှုံ့ဆော်မှုရဲ့ အကျိုးသက် ရောက်ပုံကို အိန္ဒိယမှာ စမ်းသပ် ခဲ့ကြပါတယ်။ မွေးဖွားဖို့ လှုံ့ဆော်ပေး ရတဲ့ အမျိုးသမီးအရေအတွက်များ လာတာနဲ့အမျှ သာဓကအသစ်တွေ လည်း များစွာတွေ့ရှိလာပြီး ဘယ် နည်းလမ်းက အကောင်းဆုံးစိတ်အချ ရဆုံးနဲ့ လက်ခံနိုင်ခြေအရှိဆုံးလဲဆို တာကို မေးစရာဖြစ်လာပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ အရင်းအမြစ်နည်းပါးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာတဲ့ နည်းလမ်းနှစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ misoprostol သောက် ဆေးနဲ့ transcerical Foley Catheterisation နည်းတို့ကို သုံးစွဲ လျက်ရှိပါတယ်။ တွေ့ရှိချက်တွေအရ တော့ misoprostal သောက်ဆေးကို ထပ်ခါထပ်ခါ မီးမဖွားမီ မိန်းမကိုယ် စစ်ဆေးမှုကို လျော့ချဖို့အတွက် သုံး စွဲခဲ့ပါတယ်။ သုတေသနမှာ ကိုယ်ဝန် ဆောင် ၆၀၂ ဦးပါဝင်ခဲ့ပြီး ကျပန်းခွဲ ၍ စမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်။
ရလဒ်အရ misoprostal သောက်ဆေးသောက် တဲ့ အုပ်စုက ၂၄ နာရီအတွင်း သဘာဝအတိုင်း မွေးနိုင်ခြေ ၁၀% ပိုများပြီး ခွဲစိတ်မွေးရနိုင်ခြေပိုနည်း တာ တွေ့ရပါတယ်။ သားအိမ်အလွန် အကျွံလှုံ့ဆော်မှုကတော့ နှစ်ဖွဲ့စလုံး မှာ အလွန်နည်းပါးပြီး မွေးကင်းစ ကလေး သေဆုံးမှုအပေါ်မှာတော့ ထူးထူးခြားခြားကွဲပြားမှုမရှိတာ တွေ့ ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် misoprostal အုပ်စုမှ အမျိုးသမီးတွေက ဆီးပြွန်နဲ့ ကလေးမွေးဖို့ လှုံ့ဆော်တဲ့ အမျိုးသမီး တွေထက် ရလဒ်ကိုပိုပြီးစိတ်ကျေနပ် တာ တွေ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ယခုသုတေသနကို The Lancel ဆေးပညာဂျာနယ်မှာ ပုံနှိပ်ဖော်ပြခဲ့ ပါတယ်။
လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်း ပုံရိပ် ဖော်စက် MRI နဲ့ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ တွေကို ပုံရိပ်ဖော်ကြည့်တဲ့အခါမှာ တစ်သျှူးတည်ဆောက်ပုံတွေ ပိုပြီး ပြတ်ပြတ်သားသားမြင်ရဖို့အတွက် အထောက်အပံ့ပေးတဲ့ ဆေးတွေထိုး ပြီး ရိုက်လေ့ရှိပါတယ်။ ၎င်းဆေး တွေက ဆဲလ်တွေရဲ့ အတွင်းပိုင်းကို မ၀င်ရောက်နိုင်ပေမဲ့ သွေးကြောတွေ နဲ့ ဆဲလ်များကြား အချက်ပြမှုကို ပိုကောင်းစေပြီး ပုံရိပ်ကို ပိုမိုကြည် လင်ပြတ်သားစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် သုတေသီတွေက ပိုပြီးကောင်းမွန်တဲ့နည်းလမ်းတွေကို တီထွင်ကြရင်း ဂျာမန်ကင်ဆာသုတေသန ဗဟိုတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ Deutsches Krebsfor- schungszentrum, DKFZ မှ သုတေသီတွေက သဘောတရား တစ်ခုကို အသုံးပြုရင်း ပုံရိပ်ဖော်နည်း သစ်ကို တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ယင်း သုတေသီတွေသုံးခဲ့တဲ့ သဘော တရားက ခန္ဓာကိုယ်ကဆဲလ်တွေက ဂလူးကို့စ်ကို စုပ်ယူပြီး ဆဲလ်ထဲမှာ ဖြိုခွဲကြတယ်။
ကင်ဆာဆဲလ်တွေက တော့ စွမ်းအင်အမြောက်အများလို အပ်တဲ့အတွက် ဂလူးကို့စ်ကို သာမာန်ဆဲလ်တွေထက်ပိုပြီး ဆာ လောင်စွာ စုပ်ယူကြတယ်။ ဒါကြောင့် ဆဲလ်ဧရိယာတ၀ိုက်မှာရှိတဲ့ ဂလူးကို့စ် ရဲ့ ဇီဝရုပ်ဖြစ်ပျက်မှု အနှေးအမြန်ကို စောင့်ကြည့်ရုံနဲ့ ယင်းအကျိတ်က ကင်ဆာလား၊ သာမာန်လား သိနိုင် မယ်ဆိုတဲ့ သဘောတရားဖြစ်ပါ တယ်။ သမားရိုးကျ MRI များက ရေမှာပျော်ဝင်နေတဲ့ ပရိုတွန်းများမှ အချက်ပြမှုကို အခြေခံပြီး လုပ်ဆောင် ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်က ရေဓာတ် ၆၀% ကျော် ပါဝင်တဲ့ အတွက် ပြတ်သားတဲ့ပုံရိပ်တွေကို ရရှိပါတယ်။
ဂလူးကို့စ်က ခန္ဓာကိုယ်တွင် ပါဝင်တဲ့ပမာဏ အလွန်နည်းတဲ့ အတွက် ယင်းဂလူးကို့စ်ကို မြင်သာ စေဖို့ DKFZ မှ သုတေသီတွေက7Tesla magnetic field strength သုံးထားတဲ့ ultrahigh field scanner နဲ့ ဂလူးကို့စ်မှ အချက်ပြမှုကို သီးသီးသန့်သန့်နဲ့ ကွဲပြားစွာ အချက် ပြနိုင်အောင် အကူအညီပေးမဲ့ အထူး နည်းပညာကို သုံးခဲ့ပါတယ်။ ယင်း နည်းပညာအသစ်က ဂလူးကို့စ်ပျော် ရည်ထိုးပြီးနောက် ဦးနှောက်တစ်သျှူး များအတွင်း ဂလူးကို့စ်ပြောင်းလဲမှုကို မြင်နိုင်လောက်သည်အထိ အား ကောင်းတဲ့အချက်ပြမှုရတယ်လို့ သိ ရပါတယ်။ ယင်းနည်းပညာသစ်မှာ သုံးသွားတဲ့ အခြေခံရူပဗေဒသဘော တရားကိုmagnetization transfer effect လို့ ခေါ်ပါတယ်။ သိခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာခဲ့ပေမဲ့ လူသား တွေမှာ ဂလူးကို့စ်နဲ့ ပုံရိပ်ဖော်ဖို့ထိ တော့ မအောင်မြင်ခဲ့ကြပါဘူး။ ယင်းသဘောတရားမှာ ဂလူးကို့စ်ရဲ့ ပရိုတွန်က အချက်ပြမှုကို ခန္ဓာကိုယ် ရဲ့ ရေဓာတ်ထဲသို့ လွှဲပြောင်းပေးပြီး ပုံရိပ်ဖော်စက်မှာပေါ်စေတာဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းသက်ရောက်မှုမှာ ဒေသ ခံဂလူးကို့စ်ပမာဏအပေါ် မူတည် နေတဲ့အတွက် မိမိစစ်ဆေးလိုတဲ့ ဆဲလ်အတွင်း ဂလူးကို့စ်ပြောင်းလဲမှု ကို သိနိုင်ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာ တော့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ကင်ဆာ ဆဲလ်အကျိတ်တွေက ဂလူးကို့စ်စုပ် ယူမှုကို သိနိုင်ဖို့ အခြားပုံရိပ်ဖော်နည်း ပညာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ positron emission tomography (PET) ပုံရိပ်ဖော်စနစ်ကို သုံးစွဲခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ယင်းနည်းပညာက ရေဒီယို သတ္တိကြွဂလူးကို့စ်မော်လီကျူးတွေ လိုအပ်ပါတယ်။ ယခုနည်းပညာသစ် Glucase MRI မှာတော့ မည်သည့် ရေဒီယိုသတ္တိကြွပစ္စည်းမှမပါဝင်တဲ့ အတွက် ဓာတ်ရောင်ခြည်သင့်မှုတွေ မရှိတော့ပါဘူးလို့ ပြောကြားခဲ့ပါ တယ်။
နေ့ စဉ်နှင့် အမျှ သွားလာလှုပ်ရှားနေသည့် တစ်ခါတစ်ရံ လမ်းလျှောက်များခြင်းကြောင့် ခြေထောက်လေးတွေ ခြေဖဝါးတွေ နာကျင်ကိုက်ခဲး ညောင်းညာခြင်း တို့ ဖြစ်ပေါ်လာတက်ပါသည် ။ တစ်ချို့ လမ်းလျှောက်သွားလာနေပေမဲ့ သတိမထားမိဖြစ်ပြီး မိမိခြေဖဝါးထိတွေသည့် စီးထားသော ဖိနပ်များ ရှူးများကြောင်းလည်း ပိုမို ခံစားဖြစ်ပေါ်တက်ပါသည် ။ ပျော့ပျောင်းသောအခံမပါသည့် ဖိနပ်များစီးခြင်း ဒေါက်အမြင့်ဖြင့် လမ်းလျှောက်များခြင်းကြောင့် ပိုမိုခံစားဖြစ်တက်ပါသည် ။
ညောင်ညာ ကိုက်ခဲနေသော ခြေထောက်လေးတွေ ခြေဖဝါးလေးတွေအတွက် လျှင်မြန်စွာ သက်သာစေသလို လုပ်ဆောင်ချက်အတွက် လွယ်ကူ အဆင်ပြေသည့် နည်းလမ်းတစ်ချို့မှာ အိမ်သုံးဆားကို စက္ကူအပေါ် သို့ မဟုတ် ခြေထောက်နှစ်ဖက်ဝင်ဆံ့သော ခွက် တို့ တွင်ထည့်ပုံပြီး ခြေဖြင့်နင်းခြင်း ပွတ်ခြင်း တို့ပြု့ လုပ်ပေးနိုင်သလို့ဆားရေနွေးစိမ်ခြင်း ပြု့ လုပ်ပေးနိုင်ပါသည် ။ ဆား လက်တစ်ဆုပ်စာဝန်ကျင်းခန့်ကို မပူမအေး ရေနွေးထည့်ထားသော ဇလုံးအတွင်း ထည့်ပြီး မိနစ်အနည်းငယ်ကြာ ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို စိမ်ထားပေးလိုက်ပါ စိတ်ပြီးပါက အနည်းငယ် ပူနွေးသော ရေဖြင့် ပြန်လည်ဆေးကြောပြီး ခြေထောက်နှင့် ခြေချောင်းလေးများကို အပေါ်အောက် လှုပ်ရှားပေးပါ ခြေထောက်များကို လှုပ်ရမ်းပေးပါ ။ ညအိပ်သည့် အခါတွင် ခြေထောက်ခြေဖဝါးကို ဖက်ခေါင်းအုံးအရွယ် အမြင့်အနေထားဖြင့်အောင် ခံပြီးမှ အိပ်ပေးပါ ။
နာကျင်နေပြီး ခြေချင်းဝတ်နေရာများတွင် ရောင်ရမ်းနေခြင်းဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ပါက ရေခဲတုံး ရေခဲအစများကို အဝတ်ပါးပါးတစ်ခုတွင် ထည့်ပြီး ဖြစ်ပေါ်နေသည့် ခြေချင်းဝတ်နေရာများကို မိနစ်အနည်းငယ်ကြာအောင် ပွတ်ပွတ်ပေးပါ ။ ရေခဲဝတ်ကပ်ခြင်းကြောင့် ရောင်ရမ်းနေခြင်းအတွက် သက်သာစေပါတယ် ။
ရက်ကြာမြင့်စွာ ခြေထောက်တွေ ခြေဖဝါးတွေ နာကျင်နေခြင်း ကိုက်ခဲနေခြင်း အပြင် ရောင်ရမ်းနေခဲ့မည် ဆိုပါက တစ်ခြား ရောဂါများဖြစ်ပေါ်လာတက်သည့် အနေအထားတွေကြောင့် ဆရာဝန်ထံ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အနေအထားကို ပြသပြီး ကုသ ခံယူသင့်ပါသည် ။
ဦးခေါင်း- ချွေးပေါက်များကို ပွင့် စေပြီး သွေးလည်ပတ်မှုကို ပို၍ အားကောင်းစေသည်။ ဆံပင်များ သန်စွမ်း၍ ဆံပင်ပေါက်မှုကို အား ပေးသည်။
မျက်နှာ- ချွေးပေါက်များကို ပွင့်စေပြီး အသားအရေကို နူးညံ့စေသည်။ အစိုဓာတ်ဖြည့်ဆေးရည်က အသား ထဲကို လွယ်ကူစွာ စိမ့်ဝင်စေသည်။
မျက်လုံး- မျက်လုံးတ၀ိုက်ရှိ ကြွက် သားများကို ပြေလျော့စေသည်။
လည်ပင်း- တောင့်တင်းခြင်း ကိုက် ခဲခြင်း၊ ပုံခုံးကြွက်သားများ ကိုက်ခဲ ခြင်းကို သက်သာစေသည်။ တကိုယ် လုံး သွေးလည်ပတ်မှုကိုပေး၍ ခေါင်း ကိုက်ခြင်းကိုလည်း သက်သာစေ သည်။
စိတ်အပန်းဖြေမှုကို ရယူ လိုပါက Aroma oil (သို့) organic oil များ သဘာဝအဆီတို့ကို ပူနွေး သော မျက်နှာသုတ်ပုဝါပေါ်တွင် ဆွတ်ဖျန်းပြီး အပူတင်ပေးပါက စိတ်ကိုလန်းဆန်းစေသည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ပြု လုပ်နည်း (၂) နည်းကို ဖော်ပြပေး ပါမည်။
(၁) သစ်နေကျအတိုင်း မျက်နှာသစ် ပါ။
(၂) ရေနွေးစိမ်၊ ရေနွေးညှစ်ထားသော မျက်နှာသုတ်ပုဝါကို မျက်နှာပေါ်တင် ပါ။
(၃) မျက်နှာသုတ်ပုဝါ မအေးမီ မျက်နှာမှခွာပါ။
(၄) ပြီးလျှင် မျက်နှာစိုစွတ်ကျန် နေပါက မျက်နှာသုတ်ပုဝါ အခြောက် နှင့် အသာအယာတို့သုတ်ပြီး မျက်နှာ အသားအရေ နွေးနေစဉ်၌ပင် moisturizer ကို ချက်ချင်းလိမ်းပါ။
ဒုတိယ တစ်နည်းအတွက် မျက်နှာသုတ်ပုဝါ (၂) ထည်ကို ရေနွေးစိမ်ရမည်။
(၁) ထုံးစံအတိုင်း မျက်နှာအရင် သစ်ပါ။
(၂) moisturizer ကို သုံးနေကျထက် ပမာဏမြောက်မြားစွာလိမ်းပါ။
(၃) မျက်နှာပေါ် ရေနွေးဝတ်တင်ပါ။
(၄) ရေနွေးဝတ် မအေးမီ မျက်နှာ မှဖယ်ပြီး ကနဦးလိမ်းထားသော moisturizer များကို ဒုတိယရေနွေး ၀တ်နှင့် စင်အောင်သုတ်ပါ။
(၅) ပြီးလျှင် မျက်နှာနွေးနေစဉ်၌ပင်ာသငျအကမငဖနမ ထပ်၍လိမ်းရန်ဖြစ် သည်။
University of Central Florida မှ သုတေသီတွေရဲ့ တွေ့ရှိ ချက်အရ ရေနေသတ္တ၀ါတွေရဲ့ သဘာဝထွက်ကုန်တွေက တီဘီ ရောဂါကို တိုက်ဖျက်ရာမှာ အထောက်အကူပြုနိုင်တယ်လို့ သိရ ပါတယ်။ တီဘီရောဂါဆိုတာကတော့ အဆုတ်ကို အဓိကဒုက္ခပေးတတ်တဲ့ ဘက်တီးရီးယား ကူးစက်ရောဂါ တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ လူတစ်ဦးကနေ တစ်ဦးကို အသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှ တဆင့် ကူးစက်နိုင်ပြီး၊ နှစ်စဉ် ရောဂါ သစ်ဖြစ်ပွားသူ ၁၀.၅ သန်းရှိပြီး၊ သေဆုံးသူ ၁.၅ သန်းရှိတဲ့ ရောဂါ ဆိုးကြီးတစ်မျိုးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းတီဘီရောဂါအတွက် ကုသမှုမှာ အများအားဖြင့် ၆ လကနေ ၉ လ လောက်အထိ ကြာတတ်ပြီး အနည်း ဆုံး ဆေးလေးမျိုးအရောကို သောက် သုံးရတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အများစု ကတော့ ကုထုံးကို လိုက်နာမှုမရှိပဲ သက်သာသွားတာနဲ့ ဆေးကို ရပ်ပစ် တတ်ကြပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ဆေးရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ကြောင့်ပါပဲ။ တီဘီဖြစ်စေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေမှာ ထူထဲတဲ့ ဆဲလ်နံရံတွေ ပါဝင်တဲ့အတွက် ဆေးတွေဖောက်ဝင်ဖို့ ခက်ခဲသလို၊ ကုသမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေမဲ့ ပရိုတင်း တွေလည်း ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဘက်တီးရီးယားက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခုခံအားစနစ်ထဲမှာ ၀င်ရောက်ပုန်းကွယ်နေပြီး၊ ကုသမှုပြီး မှ ပြန်လည်ထ<ကလာတတ်ပါတယ်။ ဆေးအများစုက ထ<ကနေတဲ့ရောဂါ ပိုးတွေကိုသာ ဖျက်ဆီးနိုင်စွမ်းမရှိပါ ဘူး။ ဒါကြောင့် ဖုန်းကွယ်နေတဲ့ တီဘီရောဂါပိုးတွေကို သတ်နိုင်ဖို့ င်္ဃ မှ သုတေသီတွေက ပင်လယ် ရေမြုပ်ကောင် အပါအ၀င် အခြားရေ နေသတ္တ၀ါတွေရဲ့ ဓာတုပစ္စည်းပေါင်း ၄၄၀၀ ကို လေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ တီဘီ ရောဂါနဲ့ ကင်ဆာရောဂါတွေကို တိုက်ဖျက်နိုင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အစာစားတိုင်း အသည်းကောင်းမွန်ရန် လိုအပ်
အစားလည်းဆေး ဆေးလည်းအစာ ဖြစ်နေသည့်အတွက် နေ့ စဉ်စားသုံးနေသည့်အစားအစာ
များတွင် အဆီဓာတ်လည်း လိုအပ်ပါသည် ။ မိမိခန္ဓာကိုယ်တွက် လိုအပ်သော အဆီအတွက် မည်သည့်ဆီအမျိုးများသည့် ကျန်းမာရေးအတွက် အဆိုး အကောင်း သိရှိရန်လိုအပ်ပါသည် ။ စားသောက်စရာ အကြော်အလှော်များအတွက် သုံးစွဲနေသည် ဆီများတွင် မပြည့်ဝဆီ ( unsaturated fat ) နှင့် ပြည့်ဝဆီ ( saturated fat )
ဆီနှစ်မျိုးရှိပါသည်။ ဌင်းဆီမျိုးမှ ပြည့်ဝဆီအမျိုးအစားသည်
ကျန်းမာရေးအတွက် ဆိုးကျိုးများနှင့်အတူ နာတာရှည်ရောဂါများ ဖြစ်စေပါသည် ။
ယခုအခါ အသုံးပြု့များသော စားအုန်းဆီ နှင့် တိရစ္ဆာန်များမှ ထုတ်ယူထားသည့် ၀က်ဆီ အမဲဆီ ကြက်ဆီများတို့ သည့် ပြည်ဝဆီများ ဖြစ်ကြပြီး ဌင်းပြည့်ဝဆီများကို စားသုံးမှု့ များလာခဲ့သည့်အခါ သွေးကြောနံရံများ ထူထဲမာကြောလာခြင်းကြောင့် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ ၊ အသည်းတွင် အဆီများလာသဖြင့် အသည်းအဆီဖုံးခြင်းအသည်းရောဂါ ၊ ဦးနောက်သွေးကြောများကျဉ်းမြောင်းပြီး ပိတ်ဆို့ သွားပါက ကိုယ်တစ်ခြမ်းသေ လေဖြတ်ခြင်းအဖြစ် နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေပါသည် ။ အသုံးပြု့များနေသည့် ပြည့်ဝဆီဖြစ်သော စားအုန်းဆီသည့် ကျန်းမာရေးအရ မညီညွတ်သော ဆီဖြစ်နေသည့်အတွက် သုံးစွဲစားသောက်ခြင်း မပြု့သင့်ပါ။
ဆီထဲနှစ်၍ ကြော်ထားသော အစာစားများ စားသုံးခြင်း ရှောင်သင့်ပါသည် ။ ပြည့်ဝဆီများဖြင့် သုံးစွဲ
ကြော်လှော်ပြီးနောက် ထပ်ခါထပ်ခါ အကြိမ်ကြိမ်သုံးစွဲ ကြော်လှော်သည့် အစားအစာများ စားသုံးနေကြလျှင် ဆိုးကျိုးများအလျင်အမြန် ခံစားဖြစ်ပေါ်လာပါမည်။ အရောင်ဆိုးဆေးပါဝင်ပြီး ပြည့်ဝဆီများဖြင့် ပါဝင်ပြု့လုပ်ထားသော
အစားအစာများ စားသုံးခြင်းသည်လည်း ဆိုးကျိုးနှစ်မျိုးပါရရှိစေပါသည်။
အိုမီဂါ ဖက်တီအက်ဆစ်ဖြစ်စေသည့် အစေ့အဆံမှာ နေကြာဆံ မြေပဲဆံ ဖရုံဆံ သီဟိုစေ့
တို့သည်လည်း ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်ပါသည် ။ မပြည့်ဝဆီဖြစ်သည်
စစ်မှန်သော မြေပဲဆီ နှမ်းဆီ သံလွင်ဆီ နေကြာဆီတို့ကု သုံးစွဲသင့်ပါသည် ။
ဆီများအစားအစာ လျော့နည်းချက်ပြုတ်စားသုံးခြင်းသည် လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း အရွယ်ကြီးပြီး လုပ်ဆောင်ချက်များသောအသည်းတွက် ကောင်းမွန်သည့်အပြင် ကျန်းမာမှု့အတွက်ပါ အကျိုးများစေပါတော့သည်။
လူကြီး လူငယ်အများစုမှာ လွယ်ကူသလို သောက်သုံးရ အဆင်ပြေသော အချိုရည် အအေးရည်များ နှင့် မုန့်များကို စားသောက်တက်ကြပါတယ် အဲလို အချိုရည်အများစုမှာ ကယ်လိုရီ အများအပြား ပါဝင်နေတတ်သလုိ ရေခဲမုန့်တွေနဲ့ မစ်ရှိတ်လို ဖျော်ရည်တွေမှာ ကယ်လိုရီများစွာလည်း ပါဝင်မှု့များပြားပါသည် ။
အချိုရည်နှင့် အတူ အာလူးချောင်းကြော် ဟမ်ဘာဂါ အပါ တွဲခါ စားကြပါက ကယ်လိုရီများသထက်များပါသည် ။အထူးသဖြင့် အာလူးချောင်းကြော်ကိုတော့ တတ်နိုင်သမျှရှောင်ပါ။ ဆီကြော်အသားတွေနဲ့ ဆီများများနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ အသားဟင်း၊
ဒိန်ခဲ၊ ထောပတ် စတာတွေ များများပါဝင်တဲ့ ဟင်းပွဲများ စားသောက်ခြင်း လျော့ပါ ။
ပုံမှန်ဆော်ဒါအချိုရည်တစ်ခွက်မှာ ကယ်လိုရီ ၃၀၀ လောက် ပါဝင်တတ်တဲ့အတွက် ကိုယ်အလေးချိန်တက်မှာ ကြောက်သူတွေအနေဖြင့် ဆီများအစားအစာများအပြင် အချိုရည်သောက်တက်ခြင်းကို ရှောင်သင့်ပါတယ်။
ရေ၊ အချိုဓာတ်လျှော့ထား တဲ့ လက်ဖက်ရည်ကိုသာ သောက်သုံးရန်သာ သင့်ပါသည် ။
၁။ ဆရာ ကျွန်မအသက်က ၃၃နှစ်ပါ။ အပျိုပါရှင့်။ ကျွန်မစိတ်ဖိအားများပြီး စိတ်ကျရောဂါခံစားနေတာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာပါပြီရှင့်။ လူတွေနဲ့အဆက်အဆံမရှိပဲအိမ်မှာပဲနေတာကြာပါပြီရှင်။ တခါတခါ သက်သေချင်စိတ်တွေဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါပင်မယ့် ဒါကိုရောဂါလို့မသိခဲ့ပါဘူးရှင့်။ အခုမှသိတာပါရှင့်။ ကျွန်မစိတ်ကအလိုလိုဖြစ်နေတာကိုဘယ်လိုမှထိန်းမရပါရှင့်။ မိသားစုကိုလဲရှက်ပါတယ်ရှင့်။ ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ ကုသလို့ပျောက်မလဲဆိုတာဖြေကြားပေးပါရှင်။ စိတ်ငြိမ်အောင်တရားတော့ ထိုင်ပါတယ်ရှင့်။ ဘယ်လိုဆရာဝန်နဲ့ ပြရမလဲလည်း မသိပါရှင့်။ အခြေအနေအရမ်းဆိုးသွားမှာကြောက်ပါတယ်ရှင်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။
၂။ ဆရာရှင့် သမီးအသက် ၃ဝ ရှိပါပြီ။ အိမ်ထောင်ကျတာ ၄ နှစ်ရှိပါပြီ။ သမီးတခါတလေမှာ ဘာပြဿနာမှမရှိပဲ နေရင်းထိုင်ရင်း စိတ်ကဝမ်းနည်းပြီး စိတ်ဓါတ်တွေကျနေပါတယ်။ အလိုလိုနေရင် မပျော်ရွှင်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်ဆရာ။ စိတ်ညစ်စရာ ဘာရှိသလဲလို့ ကိုယ့်ဖါသာပြန်စန်းစစ်တော့လဲ ဘာမှမရှိတာကို သိပါတယ်ဆရာ။ အဲဒါသမီး စိတ်ရောဂါ ဖြစ်နေပြီလား။ ရာသီလာခါနီးတို့ လာပြီးခါစအချိန်တွေမှာ ဖြစ်တာလဲ မဟုတ်ဘူးဆရာ။ ရာသီလဲမှန်တယ်ဆရာ။ စိတ်ကျရောဂါများလားဆရာ။ ဘယ်လိုနေထိုင်စားသောက်ရပါမလဲရှင် ကျေးဇူးပြုရ်ျ ဖြေကြားပေးပါဦးဆရာ။ အိမ်ထောင်ရေး စားဝတ်နေရေး လူမူရးတွေလဲ အားလုံးပြေလည်ပါရဲ့သားနဲ့ ဒီလိုဖြစ်နေတာပါဆရာ။
စိတ်မှာဖြစ်တာ ကျန်းမာရေးပါ။ လူမှန်သမျှ စိတ်ဆိုတာ တက်လိုက်၊ ကျလိုက်ဖြစ်ကြတာ ပုံမှန်ပါ။ ဝမ်းနည်းမှုဆိုတာ ဖြစ်နေကျပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့ စိတ်ကျတယ်ဆိုတာကတော့ ပုံမှန်မဟုတ်တော့ပါ။ ဝမ်းနည်းပူဆွေးတာထက် အများကြီး ပိုလွန်ပါတယ်။ တချို့က စိတ်ကျတယ်ဆိုတာ အနက်ခေါင်းကြီးထဲ နေရသလိုဘဲလို့ တင်စားကြတယ်။ စိတ်ကျသူတချို့တွေဟာ ဝမ်းနည်းနေတယ်လို့ မခံစားရဘူး။ အဓိပ္ပါယ်ကင်းမဲ့နေတယ်၊ ဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်နေတယ်၊ ဘာမှမရှိသလို ခံစားနေကြရတယ်။ တချို့ အထူးသဖြင့် ယောက်ျားတွေမှာဖြစ်ရင် စိတ်တို၊ ဒေါသကြီး၊ ဂနာမငြိမ်ဖြစ်နေတတ်တယ်။
အလုပ်မလုပ်နိုင်၊ စာမသင်နိုင်၊ မစားမသောက်နိုင်၊ အိပ်မရ၊ ပျော်စရာရှာမတွေ့ နိစ္စဓူဝဖြစ်နေကြတယ်။ ဒါ့ပြင် မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲပြီး၊ ကူမဲ့သူမရှိ၊ တန်ဘို့ကင်းမဲ့နေတယ်လို့ အပြင်းအထံခံစားနေကြရတယ်။ အိပ်မပျော်၊ ဒါမှမဟုတ် အမြဲတမ်းအိပ်ချင်နေ၊ အာရုံမစိုက်နိုင်၊ အရင်တုံးက ခပ်လွယ်လွယ် လုပ်နိုင်တာမျိုးကို အဲလို မလုပ်နိုင်တော့၊ အနုတ်သဘော မြင်ထင်နေတာကို မဟုတ်ပါဘူးလို့ ဘယ်လောက်ကြိုးစားကြိုးစာ မရနိုင်တာ၊ တချို့ အစားအသောက်ပျက်ပြီး တချို့ အတင်းစားချင်နေတာ၊ စိတ်တိုမယ်၊ ဒေါသကြီးနေမယ်၊ အရက် အလွန်အကျွံ သောက်လာမယ်၊ အမူအယာ၊ အပြောအဆိုတွေက မူမမှန်ဖြစ်လာမယ်၊ ဘဝဟာ ဘာမှ အဓိပ္ပါယ်မရှိတော့ဘူး ထင်နေမယ်၊ အားအင်ကုန်ခမ်းနေမယ်၊ ဘာလုပ်လုပ် နှေးကွေးနေမယ်၊ လေးလံထိုင်းမှိုင်းနေမယ်။ တယောက်ဖြစ်တာနဲ့ တယောက် မတူဘူး။ ယောက်ျား-မိန်းမ မတူသလို၊ ကလေး-လူကြီးလဲ မတူကြဘူး။
တယောက်တည်း အထီးကျန်ဖြစ်နေတာ၊ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ ကူညီထောက်ပံ့မှု ကင်းမဲ့တာ၊ လတ်တလော လောကဓံတရားထဲက အနုတ်သဘောခံစားလာရတာ၊ မိသားစုထဲမှာ စိတ်ကျရောဂါသည်ရှိတာ၊ အိမ်ထောင်ရေး မသာယာမှု ကြုံရတာ၊ ငွေကြေးခက်ခဲလွန်းတာ၊ ငယ်တုံးဘဝမှာ စိတ်ဒဏ်ရာရခဲ့ဘူးတာ၊ အရက်၊ မူးယစ်ဆေးစွဲတာ၊ အလုပ်မရှိတာ၊ ဝင်ငွေမလောက်ငတာ၊ ကျန်းမာရေးမကောင်းတာ၊ နာတာရှည်နာတဲ့ဝေဒနာရှိနေတာ။
အမေရိကားမှာ ၂ဝဝ၆-၂ဝဝ၈ လေ့လာမှုအရ ၂၃၅ဝ၆၇ ယောက်ကို ဆန်းစစ်တော့ ၉% မှာ စိတ်ကျရောဂါ ရှိနေတာ သိရတယ်။ နောက်ဆန်းစစ်ချက်တခုအရ အကြီးစားစိတ်ဓါတ်ကျမှု ဂျပန်မှာ ၃% နဲ့ အမေရိကားမှာ ၁၇% စိတ်ကျရောဂါ ဖြစ်တာသိရတယ်။ အသက် ၃ဝ-၄ဝ အတွင်း စဖြစ်တာများပြီး၊ ၅ဝ-၆ဝ ထဲမှာ ဒုတိယအကြိမ် ဖြစ်တယ်။ စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းနဲ့ နာတာရှည် နာကျင်မှုဝေဒနာခံစားနေရတာတွဲတတ်တယ်။ နှလုံးရောဂါရှိဘို့ အခွင့်အလမ်း ၁့၅-၂ ဆ ပိုတယ်။
စိတ်ဓါတ်ကျနေသူတွေဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေချင်စိတ် ပေါ်တတ်ကြတယ်။ စိတ်ထဲမှာ သေခြင်းတရားနဲ့ သတ်သေတာမျိုးကို တွေးလာတတ်တယ်။ ပါးစပ်ကလဲ ထုတ်ပြော လာနိုင်တယ်။ ပြောတိုင်းလဲ တကယ် လုပ်မှ လုပ်ပါတယ်။ အကူအညီရချင်လို့ ပြောတာမျိုးလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ သူများကို နုတ်ဆက်စကားမျိုးပြောလာရင်၊ ငါမရှိရင် သူများတွေအတွက် ပိုကောင်းမယ်လို့ ပြောလာရင်၊ အစီအစဉ်ကျကျ သူပိုင်တာတွေကို ပေးစွန့်လာတာ၊ ရုတ်တရက် သိပ်စိတ်ကျနရာကနေ ငြိမ်ပြီး ကျေနပ်မှုရသလိုဖြစ်လာရင် ဒီလိုဖြစ်တာတွေကနေ တကယ်သတ်သေတတ်တယ်။ တကယ်လို့ အရမ်း စိတ်ဓါတ် ကျနေပြီး သတ်သေချင်စိတ်ဝင်တာမျိုးဟာ ခဏပန်းဖြစ်တာ မထင်စေချင်ပါ။
၁။ Major depression အရေးပါတဲ့စိတ်ကျရောဂါ
ဘဝမှာ မပျော်နိုင်ဖြစ်လာနေမယ်။ လက္ခဏာတွေက တသမတ်ထဲဖြစ်နေမယ်။ အသင့်အတင့်ကနေ အပြင်းစာဖြစ်မယ်။ ဆေးမကုဘဲနေရင် ဒီလိုဖြစ်နေတာမျိုး ၆ လလောက်အထိ ကြာနေမယ်။ ပြန်ဖြစ်မယ်။
၂။ Atypical depression ပုံစံအတိအကျမရှိတဲ့ စိတ်ကျရောဂါ
Major depression အရေးပါတဲ့စိတ်ကျရောဂါထဲက ပုံစံခွဲတခုဖြစ်တယ်။ သတ်သတ်မှတ်မှတ်လက္ခဏာမျိုးခံစားရမယ်။ သတင်းကောင်းရချိန်မှာ ဝမ်းသာမှုရှိတတ်တယ်။ ကြာကြာတော့ မဟုတ်ဘူး။ လူက ဝလာမယ်။ စားချင်စိတ်များနေမယ်။ အိပ်တာလဲ ကြာကြာအိပ်မယ်။
၃။ Dysthymia (Recurrent, Mild depression) ပြန်ဖြစ်တဲ့ အလတ်စား စိတ်ကျရောဂါဟာ နာတာရှည် ဖြစ်တယ်။ သိပ်မဆိုးလှဘူး။ ကောင်းလိုက် ဆိုးလိုက်ဖြစ်မယ်။ ၂ နှစ်လောက်အထိကြာမယ်။
ဘဝလူနေမှုပုံစံပြောင်းလိုက်ပါ။ အပြန်အလှန်ကူညီတတ်သူတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းပါ၊ ပုံမှန် ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ၊ အိပ်ချိန်ရောက်ရင် အိပ်စက်ပါ၊ အစာအာဟာရပြည့်ဝမျှတအောင်စားသုံးပါ။ စိတ်ဖိအားရှိနေတာကို စနစ်တကျ လျှော့ချပါ၊ စိတ်ဖြေလျှော့နည်းလုပ်ပါ၊ အဆိုးမြင်၊ မကောင်းမြင်တာတွေပြုပြင်ပါ၊ စိတ်လှုပ်ရှား-ခံစားမှုတွေကို တည်ဆောက်ယူပါ၊ တတ်ကျွမ်းတဲ့ဆရာဝန်နဲ့ကုသမှုခံယူပါ၊ စိတ်မကျဆေးတွေဟာ တချို့လူတွေအတွက် အများကြီး ကောင်းစေတယ်။ ပျောက်သွားချင်မှ ပျောက်သွားလိမ့်မယ်။ ပြန်ဖြစ်တတ်လို့ပါ။ စိတ်ကုသမှုပါ ခံယူရမယ်။
• Cognitive-behavioral therapy အသိတရားနဲ့ အမူအယာဆိုင်ရာပြုပြင်မှု၊
• Music therapy တေးဂီတနဲ့ကုသခြင်း၊
• Art therapy အနုပညာနည်းနဲ့ ကုသခြင်း၊
• Group therapy အုပ်စုလိုက်ကုသပေးနည်း၊
• Psychotherapy စိတ်နည်းနဲ့ကုသနည်း၊
• Animal-assisted therapy တိရစ္ဆာန်သုံးကုသပေးနည်း၊
• Physical exercise ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းနည်း၊
• Medicines such as antidepressants ဆေးပေးကုသနည်း၊
• Keepingagratitude journal (ဂျာနယ်) သုံးနည်းတွေ ဖြစ်တယ်။
(မေဂျာ) စိတ်ကျရောဂါကို စိတ်မကျဆေးပေးတာနဲ့ စိတ်ပညာကုသမှုကိုပါ တွဲလုပ်သင့်တယ်။ တချို့ကို ဆေးရုံတင် ကုသင့်တယ်။
၁။ Medication ဆေးပေးကုသနည်း။
၂။ Psychotherapy စိတ်ပညာနည်းနဲ့ကုသနည်း၊
၃။ Electroconvulsive therapy (ECT) လျှပ်စစ်သုံးကုသနည်းကို တချို့အတွက်လုပ်ပေးရတယ်။
အသက် ၁၈ နှစ်အောက် လူနာတွေအတွက် စိတ်ပညာနည်းနဲ့ ကုသမှုဟာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်တယ်။ လျှပ်စစ်သုံး ကုသနည်းကိုတော့ မဖြစ်မှသုံးတယ်။ စိတ်ပညာနည်းနဲ့ကုသနည်းကို တယောက်ချင်းကိုဖြစ်ဖြစ် အုပ်စုလိုက်ဖြစ်ဖြစ် လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ Psychotherapists, Psychiatrists, Psychologists, Clinical social workers, Counselors, Psychiatric nurses တွေကနေ လုပ်ပေးကြတယ်။
ရှုပ်ထွေးတဲ့ အခြေအနေမျိုး ရှိသူတွေကိုတော့ ဆေးနည်းနဲ့ စိတ်နည်း ရောလုပ်ပေးသင့်တယ်။ စိတ်နည်း ထဲက အများဆုံး သုံးကြတဲ့ Cognitive behavioral therapy (CBT) နည်းဟာ ကလေးတွေနဲ့ လူငယ်တွေအတွက် သုံးတယ်။ ဆေးပေးတာနဲ့အတူ စိတ်နဲ့ ကုသနည်းတွေထဲက CBT, Interpersonal therapy, or Family therapy တခုခုနဲ့ တွဲပေးဘို့ လမ်းညွှန်တယ်။ စိတ်နည်းဟာ အရွယ်ရသူတွေအတွက် ကောင်းတယ်။ Psychoanalysis နည်းဟာ Sigmund Freud က စသုံးခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။
စိတ်မကျဆေးပေးကုသနည်းဟာ အနုစားစိတ်ဓါတ်ကျနေသူတွေအတွက် မထိရောက်လှဘူး။ ရောဂါပြင်းထံသူတွေအတွက် အလွန်ကောင်းတယ်။ နာတာရှည် (မေဂျာ) စိတ်ကျတာဆိုရင် ဆေးပေးတာ အကောင်းဆုံးဘဲ။ ဆေးအမျိုးအစား ရွေးရတယ်။ တွဲပေးချင်ပေးလိမ့်မယ်။ သက်သာရာကနေ ပုံမှန်ရောက်ဘို့ ၆-၈ ပါတ်ကြာတတ်တယ်။ ၁၆-၂ဝ ပါတ်အထိ ဆေးပေးလေ့ရှိတယ်။ တချို့ကို တသက်တာဆေးသောက်စေတယ်။
Monoamine oxidase inhibitors ဆေးအမျိုးအစားက အရင်ဆုံးပေါ်တဲ့ စိတ်မကျဆေးဖြစ်တယ်။ Isocarboxazid (Marplan)၊ Phenelzine (Nardil)၊ Selegiline (Emsam, Eldepryl, Zelapar) နဲ့ Tranylcypromine (Parnate) တွေဖြစ်ကြတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကတော့ နေ့ခင်းအိပ်ချင်နေမယ်၊ ခေါင်းမူး-ခေါင်းထဲပေါ့ပါးနေမယ်၊ သွေးဖိအား ကျမယ်၊ ဝမ်းပျက်မယ်၊ အာခေါင်ခြောက်မယ်၊ အရသာခံစားမှုပြောင်းမယ်၊ ဂနာမငြိမ်ဖြစ်မယ်၊ ကြွက်သားတွေ နာမယ်၊ အိပ်မပျော်ဖြစ်မယ်၊ လူကဝလာမယ်၊ လိင်စိတ်နည်း၊ (အော်ဂဇင်) ရဘို့ကြာရှည်၊ ယောက်ျားလိင်တံသန်မာမှု အဖြစ်နည်း၊ ဆီးသွားရတာ ခက်မယ်၊ ထုံကျင်ကျင်ဖြစ်မယ်။
Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) ဆိုတဲ့ဆေးက အခြေခံအကျဆုံးသုံးတဲ့ စိတ်မကျဆေး ဖြစ်တယ်။ Citalopram (Celexa)၊ Escitalopram (Lexapro)၊ Fluoxetine (Prozac, Prozac Weekly, Sarafem)၊ Paroxetine (Paxil, Paxil CR, Pexeva)၊ Sertraline (Zoloft) နဲ့ Fluoxetine combined with the atypical antipsychotic olanzapine (Symbyax) တွေဖြစ်ကြတယ်။ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးလဲ သိပ်မဆိုးဘူး။ ပျို့၊ အာခေါင်ခြောက်၊ ခေါင်းကိုက်၊ ဝမ်းပျက်၊ ဂနာမငြိမ်၊ စိတ်တို၊ ဒေါသထွက်၊ လိင်စိတ်နည်း၊ (အော်ဂဇင်) ရဘို့ကြာရှည်၊ ယောက်ျား လိင်တံသန်မာမှု အဖြစ်နည်း၊ အနီပြင်ထွက်၊ ချွေးထွက်များ၊ လူဝ၊ အိပ်ချင်၊ အိပ်မပျော်။
SSRI နဲ့ မသက်သာသူတွေကို Bupropion ပေးတယ်။ Venlafaxine ကလဲထိရောက်တယ်။ Adolescent depression တွေကို Fluoxetine နဲ့ Escitalopram ၂ မျိုးသုံးတယ်။ ကလေးတွေကို ဆေးပေးနည်းက မထိရောက်တာတွေ့ရတယ်။ SSRIs ဆေးပေးလို့ အိပ်မရသူတွေကို Mirtazapine ဆေးပေးရတယ်။ အရင်ကတည်းကသုံးနေခဲ့တဲ့ Monoamine oxidase inhibitors ဆေးတွေကို တခါတလေမှ သုံးတော့တယ်။
စားဆေး နှစ်မျိုးတွဲ ပေးနေပေမဲ့ (မေဂျာ) စိတ်ကျရောဂါ မသက်သာနိုင်တာမျိုးကို ဆေးကုတာကိုခံနိုင်နေသူလို့ခေါ်သလို အဲလိုကလဲ ၆၅% လောက်မှာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အမှန်ပြောရရင် ဆရာဝန်အဖို့ ဒီနာမည် တပ်ရတာ မလွယ်လှပါ။
အသက် ၁၈-၂၄ နှစ် မှာဖြစ်ရင် SSRIs ဆေးပေးနေရင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေချင်တာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ကြသေးတယ်။ လူကြီးတွေကို ဒီဆေးပေးတာ ဒီလိုအန္ကရာယ် နည်းစေတယ်လို့ ဆန်းစစ်မှုတခုမှာ တွေ့ရတယ်။
Electroconvulsive therapy (ECT) လျှပ်စစ်ပေးကုသနည်း
မေ့ဆေးပေးထားပြီး နားထင်မှာ ဝါယာကြိုး ၂ ချောင်းကပ်ထားပြီး လျှပ်စစ်ဓါတ်လွှတ်ပေးတယ်။ လူနာကို တမင်တကာ တက်အောင် လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်။ ဆေးပေးလို့ မသက်သာသူတွေကို လုပ်တာပါ။ သက်ရောက်မှုပြတာ ပိုမြန်တယ်။ လူနာဟာ လုံးဝအစားမစာတော့တာ၊ သတ်သေချင်စိတ်တွေ ဖြစ်လာမျိုးမှာ အရေးပေါ်ကုသနည်း ဖြစ်တယ်။
အကြီးစားဖြစ်တဲ့ရောဂါသမားတွေက ဆေးကုကု၊ မကုဘဲနေနေ ၁ဝ-၁၅% မှာ သက်သာလာနိုင်ပါတယ်။ ပြန်ဖြစ်မှာ နည်းစေအောင် ဆေးကို သက်သာတဲ့နောက် ၆ လ အထိပေးရမယ်။ ဒိထက်မက ကြာကြာ ပေးသင့်သူတွေလဲ ရှိပါတယ်။ အားမနာတမ်းပြောရရင် စိတ်ကျရောဂါရှိသူတွေဟာ သက်တမ်း တိုကြတတ်တယ်။ သတ်သေသူနှုန်း ၃့၎% ပျမ်းမျှရှိပြီး၊ ယောက်ျားတွေမှာ ၇% နဲ့ မိန်းမတွေမှာ ၁% ရှိတာ အမေရိကားမှာပါ။ သတ်သေဘို့ကြိုးစားမှုကတော့ အမျိုးသမီးတွေမှာ ပိုများတယ်။
စိတ်ကျရောဂါကို (ဟစ်ပိုခရေးတီးစ်) လက်ထက်ကတည်းက Melancholia နာမည်တမျိုးနဲ့ သိခဲ့တာပါ။ ဗြိတိသျှဝန်ကြီးချုပ် (ချာချီ) မှာ ဖြစ်တော့ နာမည်ပိုကြီးလာစေတယ်။ စိတ်ဓါတ်ကျစရာ မဟုတ်ဘူးလို့ တွေးလိုက်စေချင်ပါတယ်။
ပန်းနာရင်ကြပ်လူနာတိုင်းမှာ စတီးရွိုက်က အသုံးမ၀င်နိုင်
ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါဆိုတာ ဘ၀တစ်သက်တာလုံး ကြုံတွေ့နေ ရနိုင်တဲ့ လေပြွန်ရောင်ရမ်းသည့် အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီး အသက်ရှူမ ၀ခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ မောပန်းခြင်း စတဲ့ လက္ခဏာတွေ ခံစားနိုင်ရပါ တယ်။ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ လူဦးရေ ၁၀% လောက်ဖြစ်ပွားနေကြပြီး၊ အမေရိကန်တစ်နိုင်ငံတည်းမှာပင် ရောဂါဖြစ်ပွားနေသူ သန်း ၂၀ လောက်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကော်တီကိုစတီးရွိုက်ရှူဆေးတွေက လေပြွန်ရောင်ရမ်းမှုကို သက်သာ စေပေမဲ့ ပြင်းထန်ပန်းနာရင်ကြပ် ဝေဒနာရှင်တွေရဲ့ ၅-၁၀% လောက် အပေါ်ကိုတော့ ယင်းရှူဆေးတွေက သက်ရောက်မှုမရှိပါဘူး။
လက်ရှိ ကုထုံးတွေက တကယ်တမ်း ပြင်းထန် ပန်းနာရင်ကြပ် ဝေဒနာရှင်တွေ အတွက် လုံလောက်မှုမရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် ပြင်းထန်ပန်းနာရင်ကြပ် ဝေဒနာရှင်တွေရဲ့ ရောဂါဇစ်မြစ်ကို ပိုသိရဖို့နဲ့ ဘာကြောင့် စတီးရွိုက်ကို တုန့်ပြန်မှုနည်းလည်းဆိုတာကို ရှာ ဖွေပြီး ကုထုံးသစ်တွေ တွေ့ရှိဖို့ University of Pittsburgh မှ သုတေသီတွေက သုတေသနလုပ်ခဲ့ ကြပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ သုတေသနတွေ အရ ပြင်းထန်ပန်းနာရင်ကြပ် ဝေဒနာရှင်တွေရဲ့ ထက်ဝက်လောက် မှာ ၎င်းင်းတို့ရဲ့ လေပြွန်ဆဲလ်များထဲ၌ ရောင်ရမ်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ ပရိုတင်း interferon-gamma ပမာဏတွေ မြင့်တက်နေတာကို တွေ့ရပြီး၊ ယင်းအတွက်ကြောင့်ပဲ အဆုတ်ရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာ ညံ့ဖျင်းရတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
သုတေသန အသစ်မှာတော့ interferon-gamma အချက်ပြမှုက ပြင်းထန် ပန်းနာရင်ကြပ်ဝေဒနာရှင် တွေမှာ စတီးရွိုက်တုန့်ပြန်မှု အား နည်းရခြင်းရဲ့ အဓိကအချက်အလက် ကို သုတေသနလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် interferon-gamma ရဲ့ လှုံ့ဆော်မှုကြောင့် ထွက်ပေါ်လာပြီး၊ ခုခံအားစနစ်ဆဲလ် တွေကိုစုဆောင်းကာ ရောင်ရမ်းမှုကို ဖြစ်စေတဲ့ CXCL 10 ပရိုတင်းကို အာရုံစိုက် လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ ဃဌဃူ ၁၀ ပရိုတင်း ပမာဏက ပြင်းထန် ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါရှိပြီး၊ ကော်တီကိုစတီးရွိုက်ပမာဏ အများ ကြီးသုံးကာ ကုသနေရတဲ့ ဝေဒနာရှင် တွေရဲ့ ထက်ဝက်လောက်မှာ မြင့် တက်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် CXCL 10 က ပြင်းထန် ပန်းနာရင်ကြပ်ဝေဒနာရှင်တွေမှာ ထက် ပြင်းထန်အဆင့်နိမ့်ပြီး စတီးရွိုက်ဆေးတွေနဲ့ ကုသမှုခံယူနေ တဲ့သူတွေမှာ ပိုပြီးမြင့်တက်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
သုတေသီတွေက CXCL 10 ပရိုတင်းမြင့်နေတဲ့အုပ်စု နဲ့ မမြင့်တဲ့အုပ်စုဆိုပြီး ခွဲကြည့်လိုက် ရာ CXCL 10 မြင့်နေတဲ့ အုပ်စုက ရောဂါထိန်းချုပ်ရဖို့ ခက်ခဲပြီး အရေး ပေါ်ဌာနတွေကို မကြာခဏ သွားရ ကာ၊ ရောဂါဖောက်တဲ့အချိန် ပိုများ တာကို တွေ့ရပါတယ်။ နောက်တဆင့် သုတေသီတွေက စတီးရွိုက်အနေနဲ့ CXCL 10 ပရိုတင်းကို ဖိနှိပ်နိုင်ခြင်း မရှိတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ စတီးရွိုက်က CXCL 10 ထုတ်လုပ်မှုကို လှုံ့ဆော် ပေးတဲ့ interferon- gamma အချက်ပြတွေကို တည်ငြိမ်စေတာ ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အနာဂတ်မှာ CXCL 10 ကို စတီးရွိုက်တုန့်ပြန်မှု အားနည်းတဲ့ လူနာတွေကို ရှာဖွေရာမှာသုံးမဲ့ ဇီဝ အမှတ်အသားအဖြစ် လာမည့်နှစ် အနည်းငယ်အတွင်း သုံးလာနိုင်မယ် လို့ သိရပါတယ်။
Hepatitis B Overview အသည်းရောင် (ဘီ) ဆိုတာ
အသက်၃၄နှစ် (ကျား)။ ကျွန်တော် ၂၀၀၇ မှာသွေးစစ်ကြည့်တာ ဘီးပိုးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ နောက် ၆အကြာထပ်စစ်လည်းရှိပါတယ်။ အခုချိန်ထိရှိနေပါတယ်။ ဘီပိုးမကူးအောင် ကာကွယ်ဆေး ၃ကြိမ်ထိုးရတယ်လို့ ကျွန်တော်သိထားပါတယ်ဆရာ။ ကာကွယ်ဆေးအားလုံးထိုးပြီးဖို့ အချိန်ဘယ်လောက်ပေးရပါသလဲဆရာ။ ကာကွယ်ဆေးအားလုံး ထိုးပြီးတဲ့နေ့ကစပြီး ဘီပိုးတဲ့ယောက်ျား၊ ဘီပိုးမရှိမိန်းမအိမ်ထောင်ပြုလို့ ရပြီလားဆရာ။ ဆေးအားလုံးထိုးပြီးရင် ဘီပိုးကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စွမ်းအင် ရှိ၊မရှိကို စစ်ဖို့လိုသေးလားဆရာ။
၂။ ဆရာ သမီး နော့့် ပါ။ သမီးအမျိုးသားမှာ အသည်ဒရောင်အသားဝါ B ပိုးရှိပါတယ်။ သမီးသိချင်တာက အသည်းရောင်အသားဝါ B ပိုးက ပျောက်နိုင်ပါလာဆရာ။ သမီးမှာတော့မရှိပါဘူးဆရာ။ ဆေးဒီနေ့စစ်တာပါ။ သမီးအမျိုးသားက B ပိုးအခုမှာရှိတာပါ ကလေးရောစစ်ဖို့လိုလားဆရာ။ အသားဝါပျောက်ဖို့ ဘယ်နှစ်လလောက် နားရမလဲဆရာ။
အသည်းရောင် (ဘီ) ဆိုတာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကနေကူးစက်တယ်။ ရက်တိုနဲ့ နာတာရှည်ဖြစ်တယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာအရည်တွေနဲ့ သွေးကနေတဆင့်ကူးစက်တယ်။ hepatitis B surface antigen ၆ လအနည်းဆုံးရှိနေသူကို နာတာရှည်ခေါ်တယ်။
လူပေါင်း သန်း ၂၄ဝ အထိ နာတာရှည်ရှိနေတယ်။ တနှစ်မှာ လူပေါင်း ၇၈ဝဝဝဝ သေဆုံးနေရတယ်။ ၆၅ဝဝဝဝ တို့ဟာ အသည်းခြောက်တာနဲ့ အသည်းကင်ဆာကြောင့် သေကြရတယ်။ ၁၃ဝဝဝဝ ယောက်က ရက်တိုအသည်းရောင်လို့ သေဆုံးတယ်။ ကျန်းမာရေးဌာနမှာ အလုပ်လုပ်ရသူတွေအတွက် လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ဖြစ်တယ်။ ၁၉၈၂ ကတည်းက ပေါ်ခဲ့တဲ့ ကာကွယ်ဆေးထိုးထားပြီး ကာကွယ်နိုင်ကြပါတယ်။ ဆာဟာရ အောက်ပိုင်းဒေသနဲ့ အရှေ့အာရှမှာ အဖြစ်များတယ်။ လူကြီး ၅-၁ဝ% မှာ ကူးစက်ခံနေကြရတယ်။
ပိုးဟာ ကိုယ်အပြင်ဖက်မှာ ၇ ရက်အထိရှင်နေနိုင်တယ်။ ပိုးဝင်လာပြီးနောက် ပျမ်းမျှ ၇၅ ရက်လောက်နေမှ ရောဂါ ပေါ်လာတယ်။ တချို့မှာ ၃ဝ ရက်ကနေ ၁၈ဝ ရက်ရှိတယ်။ ပိုးဝင်ခံရသူကို ၃ဝ ရက်နဲ့ ၆ဝ ရက်မှာစမ်းလို့ရတယ်။
အဖြစ်များဒေသတွေမှာ ကလေးမွေးရာကနေကူးတာများတယ်။ သွေးကနေလည်းများတယ်။ ကလေးချင်း ၅ နှစ်အတွင်း ကူးတာလည်းမနည်းပါ။
တံတွေး၊ ရာသီသွေး၊ ဗဂျိုင်းနာအရည်၊ သုက်ရည်တွေထဲမှာပိုးတွေပါနေတယ်။ လိင်ကတဆင့် (ကျား-မ၊ ကျား-ကျား) ကူးတယ်။ ဆေးထိုးအပ်ကနေလည်းကူးတယ်။ ကူးစက်သူတွေထဲက ၅% လောက်မှာ နာတာရှည်အသည်းရောင် ဖြစ်တယ်။ ချွေးကနေ ကူးမလား သံသယရှိတယ်။
ပိုးဝင်ကာစမှာ ဘာမှမသိလိုက်သူကများတယ်။ တချို့ အသားဝါမယ်။ အားယုတ်မယ်။ ပျို့-အန်မယ်။ ဗိုက်နာမယ်။
ကူးစက်ခံရပေမယ့် ၉ဝ% ဟာ တနှစ်အတွင်း ကောင်းသွားကြတယ်။ အသက်ငယ်ကလေးတွေမှာကူးခံရရင် နာတာရှည်ဖြစ်တာများတယ်။ ၅ နှစ် အောက်တွေ ၈ဝ-၉ဝ%၊ ၆ နှစ်အထက် ၃ဝ-၅ဝ%။ လူကြီး ၅% ထက်နည်းတယ်။ နာတာရှည်တွေထဲက ၂ဝ-၃ဝ% မှာ အသည်းခြောက်တာနဲ့ အသည်းကင်ဆာဖြစ်နိုင်တယ်။
ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်နည်းတွေများတယ်။ (HBsAg) ကိုစမ်းရတာများတယ်။ သွေးလှူမယ့်သူတိုင်းကိုစမ်းတယ်။ ရက်တို အသည်းရောင်နေသူမှာ HBsAg ရှိမယ်။ (IgM) antibody ရှိမယ်။ HBcAg ရှိမယ်။ (HBeAg) အပေါင်းပြမယ်။ HBeAg ဆိုတာက ဗိုင်းရပ်စ်တွေပွါးများနောတကိုပြတယ်။ HBeAg ရရှိနေတယ်ဆိုတာ ကူးစက်နိုင်တာကိုပြနေတယ်။ နာတာရှည် အသည်းရောင်ဆိုတာ HBsAg ၆ လအထိ ဆက်ရှိမေယ်။ HBeAg ရှိချင်ရှိမယ်။ ရှိချင်မှလည်းရှိမယ်။ HBsAg ရှိနေတယ် ဆိုတာ နာတာရှည် ဖြစ်နေတာ။ တချိန်မှာ (hepatocellullar carcinoma) ကင်ဆာ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။
ရက်တိုကို ဘယ်လိုကုမလည်း တိတိကျကျမရှိပါ။ Tenofovir or Entecavir စာဆေးတွေသုံးတယ်။ တရက် ၁ ပြား။ ဆေးယဉ်လာနေတယ်။ ပျောက်မှာမဟုတ်ပေမယ့် ပိုးတွေပွါးတာကိုနှေးစေမယ်။ ဆေးဆက်သောက်နေရတယ်။ ထိုးဆေးလည်းသုံးတယ်။
Hepatitis B vaccine ကာကွယ်ဆေးကို မွေးကာစကလေးတိုင်း ၂၄ နာရီအတွင်းထိုးပါ။ ၃ လုံးပြည့်အောင်ထိုးပါ။
ဆီးချိုရောဂါဝေဒနာရှင်များအတွက် အကြမ်းအားဖြင့် အဓိကအစာအုပ်စု (၃) မျိုး -
(၁) လုံးဝရှောင်ရမဲ့ အစားအစာတွေ = ဂလူးကို့စ်၊ သကြား၊ နို့ဆီ၊ ထန်းလျက်၊ ကြံသကာ နဲ့ အဲဒါတွေကနေ လုပ်ထားတဲ့ အစားအစာတွေ၊
(၂) အသင့်အတင့်သာ စားသုံးနိုင်တဲ့ အစားအစာတွေ = ဆန်၊ ဂျုံ၊ ပြောင်း၊ အာလူး၊ ကန်စွန်းဥ၊ ပိန်းဥ စတဲ့ ကစီဓါတ်များတဲ့ အစာများ၊ ချိုတဲ့ အသီးအနှံများ၊ ပဲအမျိုးမျိုးနဲ့ အဲဒါတွေကနေ လုပ်ထားတဲ့ အစားအစာတွေ၊
(၃) ကြိုက်သလို စားသုံးနိုင်တဲ့ အစားအစာတွေ = အသား၊ ငါး၊ အချိုဓါတ်မရှိတဲ့ အသီးအနှံများ၊ အရွက်များ။
• ပင်မအစားအစာတွေမှာ ဆန်ဖြူ ထက် ဆန်လုံးညိုက သင့်တယ်။ ခေါက်ဆွဲက ပိုသင့်တယ်။ ပေါင်မုံ့က ကြားကြတယ်။
• သစ်ဥ-သစ်ဖုတွေ အစဉ်လိုက်ဆိုရင် (အရင်ရေးတဲ့အစာ ပိုသင့်) မျောက်ဥ၊ မုန်လာဥနီ၊ ကန်စွန်းဥ၊ အာလူး၊
• ပဲတွေ အစဉ်လိုက်ဆိုရင် (အရင်ရေးတဲ့အစာ ပိုသင့်) ပဲပုပ်၊ ကုလားပဲ၊ ပဲကတ္တီပါ၊ ပဲနီလေး၊ ပဲထောပါတ်၊
• သစ်သီး အမျိုးမျိုး အစဉ်လိုက်ဆိုရင် (အရင်ရေးတဲ့အစာ ပိုသင့်) ပန်းသီး၊ သစ်တော်သီး၊ ဆီးသီး၊ စပျစ်သီး၊ လိမ္မော်သီး၊ ငှက်ပျောသီး၊ သရက်သီး၊ နာနတ်သီး၊ သင်္ဘောသီး၊ ဖရဲသီး၊
• နို့နဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေ အစဉ်လိုက်ဆိုရင် (အရင်ရေးတဲ့အစာ ပိုသင့်) နွားနို့၊ ဒိန်ချဉ်၊ နို့ဆီ၊ ရေခဲမုန့်၊
• သကြား အမျိုးမျိုး အစဉ်လိုက်ဆိုရင် (အရင်ရေးတဲ့အစာ ပိုသင့်) သစ်သီးသကြား (Fructose)၊ နို့သကြား (Lactose)၊ ကြံသကြား (Sucrose)၊ ပျားရည်၊ ဂလူးကို့စ် (Glucose)၊
• အချိုရည်အမျိုးမျိုး (အရင်ရေးတဲ့အစာ ပိုသင့်) ပန်းသီးဖျော်ရည်၊ လိမ္မော်ရည်၊ ကိုကာကိုလာ၊ လင်မနစ်၊
အစားတွေ တတ်နိုင်သမျှရှောင်ပါလေ။ ဆီးချိုရှိလျှက် အသက် ၁၂ဝ ရှည်ပါစေ။
ပိုလန်နိုင်ငံ၊ ၀ါဆောရှိ Nencki အင်စတီကျူမှ သုတေသီတွေက အရက်စွဲခြင်းနောက်ကွယ်က ဖြစ်စဉ် အသစ်တစ်ခုကို တွေ့ရှိခဲ့ပြီး Biology Psychiatry မှာ ပုံနှိပ်ဖော် ပြခဲ့ပါတယ်။ လူတွေအရက်စွဲတာကို ကုသဖို့အတွက် ဆေးတွေစဉ်းစား တဲ့အခါ ပထမဆုံးစဉ်းစားတာက အရက်သောက်ရာမှ ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် ဓာတုအချက်ပြမှုတွေကို ပိုပြီးလှုံ့ ဆော်ဖို့ ဒါမှမဟုတ် တားဆီးဖို့ စ သဖြင့် စဉ်းစားခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေ မယ့် ယခုသုတေသနကတော့ အာရုံ ကြောဆဲလ်တွေကို ၀န်းရံထားတဲ့ ပရို တင်းကွန်ယက်တွေကို ပြောင်းလဲစေ ပြီး ဦးနှောက်လှုံ့ဆော်မှုကို ပြောင်းလဲ စေမယ့် ဖြစ်စဉ်ကို အဓိကထား သုတေသနလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အာရုံ ကြောဆဲလ်တွေကို ၀န်းရံထားတဲ့ ပရို တင်းကွန်ယက်ကိုmatrix-metall oproteinase9(MMP-9) အင်ဇိုင်း က ထိန်းညှိပေးပါတယ်။
သုတေသန မှာ သာမန်ကြွက်တွေနဲ့ MMP-9 အင်ဇိုင်းမပါဝင်တဲ့ ကြွက်တွေကို အရက်စွဲတဲ့ အမူအကျင့် ဖြစ်ပေါ်စေဖို့ အရက်ကိုအလိုရှိတိုင်း သောက်နိုင် အောင် စီစဉ်ပေးထားခဲ့ပါတယ်။ ကာ လတစ်ခုကြာပြီး အရက်စွဲပြီးသွားတဲ့ နောက် အရက်ကိုကန့်သတ်လိုက်ရာ MMP-9 KO အင်ဇိုင်းမပါတဲ့ ကြွက်တွေက အရက်ပြတ်တဲ့လက္ခ ဏာတွေကို သာမန်ကြွက်များ ကဲ့သို့ ခံစားရပေမယ့် အရက်ရရှိဖို့ သိပ်ပြီး စိတ်အားထက်သန်မှု မရှိတာ ကို တွေ့ရပါတယ်။ ယင်းနောက် သု တေသီ တွေက စိတ်အားထက်သန်မှု ကို စမ်းသပ်ဖို့အတွက် ကြွက်တွေရဲ့amygdala လို့ခေါ်တဲ့ ဦးနှောက်ထဲ က စိတ်ခံစားမှုကို ထိန်းချုပ်တဲ့ ဗဟိုမှာ MMP-9 အင်ဇိုင်းကို ပြန် လည်ထည့်ပေးခဲ့ရာ အရက်စွဲတဲ့ခံစား ချက်လက္ခဏာတွေ ပြန်လည်ပေါ် လွင်လာတာ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
စိတ် ၀င်စားဖို့ကောင်းတဲ့ တွေ့ရှိချက်က တော့ လူသားအရက်စွဲနေတဲ့ သူတွေ မှာ MMP-9 ဗီဇရုပ်ပြောင်းများစွာက MMP-9 အင်ဇိုင်းထုတ်လုပ်မှုကို ပိုများစေပြီး အရက်ကိုစွဲလန်းတဲ့ ခံ စားချက်ကို ပိုဖြစ်စေတာ တွေ့ရပါ တယ်။ သုတေသနမှာ အရက်စွဲနေ တဲ့သူ ၁၆၇ ဦးနဲ့ သာမန်အမျိုးသား ၁၉၉ ဦး ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဆေးကုသ ရာမှာ သုံးတဲ့ အရက်စွဲမှုအခြေအနေ သတ်မှတ်ချက်ကို အသုံးပြုပြီး အမူ အကျင့်တွေကို ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရာ အရက် စွဲနေတဲ့သူတွေထဲက MMP-9 ဗီဇရဲ့ T ပုံပြောင်းပါဝင်တဲ့ သူတွေက C ပုံ ပြောင်းပါဝင်တဲ့ သူတွေထက် အ ရက် ကိုပိုသောက်တာ တွေ့ရပါတယ်။ ယင်း တွေ့ရှိချက်က MMP-9 ရဲ့ အရက် အပေါ် စွဲလန်းမှုအခန်းကဏ္ဍကို ပိုပြီးပေါ်လွင်စေခဲ့ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ သုတေသနတွေမှာတော့ MMP-9 က အစားစားလိုစိတ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မှတ်ဥာဏ်ကို လှုံ့ဆော် ပေးတယ်လို့ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ရလဒ်တွေအရ ကြွက်တွေမှာ MMP-9 အင်ဇိုင်း မပါခြင်းက အရက်ကြောင့် amygdala ပေါ်မှာ ပြောင်းလဲမှုတွေကို လျော့နည်း စေတာကြောင့် ဖြစ်ပါ တယ်။ ယင်းတွေ့ရှိမှုက MMP-9 ကို အရက်စွဲတာကို ကုသရာမှာသုံးတဲ့ ဆေးအဖြစ် ထုတ်လုပ်ရာမှာ ကူညီ နိုင်မယ်လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
-ခြေကိုချဲထားပြီး ခြေတစ်ချောင်းနှင့် တစ်ချောင်း မျဉ်းပြိုင်ပုံထားပါ။
- ဘယ်ခြေကို (၉၀.) ကွေးထား၍ ညာခြေကို အတွင်းဖက်၌ ထားပါ။
- ဘယ်ဒူးကွေးလိုက်သည်နှင့် အသက်ရှူသွင်းပါ။
- ညာခြေကိုဆန့်ပြီး လက်မောင်း (၂) ဖက်ကို ဆန့်တန်းထားပါ။
- ဦးခေါင်းကို ဘယ်သို့လှည့်၍ လက်ကောက်ဝတ်ကို ကြည့်ပါ။
- (၇) ကြိမ်မှ (၁၀) ကြိမ် ပြုလုပ်ပါ။ ဘက်ပြောင်းပါ။
- ခြေ (၂) ဖက်ကို ချဲထားပါ။ ဘယ်ခြေကို (၉၀)ဒီဂရီ၊ ညာခြေကို (၁၅) ဒီဂရီ ချဲထားပါ။
- ဘယ်ဖက်ခြေချင်းဝတ်ကို ဘယ် လက်ချောင်းဖြင့် ထိပါ။ ညာလက်ကို အပေါ်သို့ ဖြောင့်မတ်စွာ ထောင်ထား ပါ။ လက်မောင်းများသည်လည်း ဖြောင့်နေရမည်။
- ဒူးနှင့် ကျောရိုးကိုလည်း မတ်မတ် ထားပါ။ မျက်နှာကို အပေါ်သို့မော့၍ လက်ချောင်းများကိုကြည့်နေပါ။
- ပြီးလျှင် အခြားတစ်ဖက်သို့ ဘက် ပြောင်း၍ ပြုလုပ်ပါ။
- မှောက်လျက်အနေအထားတွင် အသက်ပြင်းပြင်းရှူသွင်းပါ။ ကိုယ် အပေါ်ပိုင်းကို ဖြည်းဖြည်းချင်းမçတင် ပါ။ ကိုယ်အောက်ပိုင်းက ကြမ်းနှင့် ထိနေမည်။
- လက်မောင်များနှင့် ခြေများက ခန္ဓာကိုယ်ကို ထိန်းထားချိန်တွင် ဦးခေါင်းက အပေါ်ကိုကြည့်ပါ။
- ဖြည်းဖြည်းချင်း အသက်ရှူထုတ်ပြီး မူလအနေအထားတွင်ပြန်နေပါ။
- ဤလေ့ကျင့်စဉ်ကို အကြိမ်ရေ ကြိုးစားပြီးတိုး၍ပြုလုပ်ပါ။
- မှောက်လျက်အနေအထားတွင် အသက်ရှူသွင်းပါ။ ဒူးကို အပေါ်ဖက် သို့ ကွေးတင်ပါ။ မိမိဦးခေါင်း အနောက်ဘက်ကို ကွေးတင်ပါ။
- ခြေချင်းဝတ်များကို လက်နှင့် ကိုင် ၍ အသက်ရှူသွင်းပါ။ ခြေနှင့် လက်မောင်းများကို ဤအနေအထား ၌ အပေါ်ဖက်သို့ မိမိတတ်နိုင်သ လောက် ဆွဲတင်ပါ။
- မိမိ၏ တင်နှင့် ရင်ကို ကြမ်းပြင် မှနေ၍ အပေါ်ဖက်သို့ မçတင်ပါ။ ထိုအချိန်တွင် balance က ၀မ်းဗိုက် ပေါ်တွင် ရှိနေရမည်။
- (၃၀) စက္ကန့်ထား၍ ဖြည်းဖြည်း ချင်းလျော့ပါ။
၃။ မင်္ဂလာပါဆရာ။ ကျွန်တော်၏သား ၁၆ နှစ်ရှိပါပြီ။ သူ့မှာ အသက်ရူထုတ်လိုက်သည့်အခါ ထွက်လာသည့် လေတွင် ဆိုးဝါးသည့်အနံတစ်ခု ထွက်ထွက်လာပါသည်။ ငယ်ရွယ်သည့်အရွယ်က အနည်းငယ်သာ ထွက်ပါသည်။ ကြီးလာမှသာ ၎င်းဆိုးဝါးသည့်အနံမှာပိုပိုထွက်လာပါသည်။ သွားနှင့်ခံတွင်းဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ကြည့်ကာ ခံတွင်းသန့်စဉ်ဆေးရည်နှင့် အာလုပ်ကျဉ်းခြင်း၊ ညွန်ကြားသောသွားတိုက်ဆေးများဖြင့် သွားတိုက်ခြင်းများကို ပြုလုပ်စေခဲ့ပါသည်။ သို့သော်လည်း ယင်းအနံဆိုးသည်ပျောက်သွားခြင်းမရှိပါ။ ညအိပ်ယာဝင်လျှင် အိပ်ယာထဲတွင်းပင် ဤဆိုးဝါးသည့်အနံသည် စွဲ၍ ကျန်ခဲ့ပါသည်။ ခံတွင်းအနံမဟုတ်ပါ။ ကိုယ်မှထွက်သောချွေးနံ့လည်းမဟုတ်ပါ။ အသက်ရူသည့်အခါတွင် ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် ဘာဆက်လုပ်သင့်သည်ကို ဆရာအနေနှင့်ညွန်ပြပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
၄။ ဆရာ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော် ခံတွင်းနံ့ဆိုးပါတယ်ဆရာ။ သွားဆရာဝန်ပြတဲ့အခါ tartar cleaning လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒါလုပ်ပြီးကတည်းက ရံဖန်ရံခါ သွားကျင်တာခံစားရပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်လဲ ဖြစ်ကောင်းမှ ဖြစ်မှာပါ။ ကျွန်တော် မသိပါခင်ဗျာ။ အစာစားပြီးတိုင်း ပလုတ်ကျင်း၊ သွားတိုက်သော်လည်း ခံတွင်းနံ့ဆိုးမပျောက်ပါ။ စကားပြောရာတွင် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပင်မပြောဝံ့ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုပျောက်သလို ခံစားရပါသည်။ ခံတွင်းနံ့ဆိုးခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းနဲ့ အနံ့ မဆိုးအောင် ဘယ်လိုပြုမူနေထိုင်ရမလဲ သိပါရစေ။ သွားဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာများကြောင့် ကူးစက်ရောဂါ ဥပမာ HIV ကူးစက်နိုင်ပါသလား သိပါရစေခင်ဗျာ။ သွားဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာတွေဟာ တခါသုံး မဟုတ်လို့ သွားဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များအနေနဲ့ မည်သို့မည်ပုံ သန့်ရှင်းသည်ကို သိလို၍ မေးမြန်းခြင်းပါခင်ဗျာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။
လူတွေထဲက ၂၅% ဟာအနည်းနဲ့အများခံတွင်းနံ့ မကောင်းကြပါ။ ခံတွင်းနံ့ မကောင်းတာကိုဆေးစာနဲ့ Halitosis ခေါ်တယ်။ သွား-ခံတွင်းရောဂါနဲ့ တခြားကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကနေ ဖြစ်စေတယ်။ အစားအသောက်ကြောင့်လည်း ဖြစ်စေတယ်။ ၈၅-ဝဝ% ဟာခံတွင်းနဲ့ ဆိုင်တယ်။ အသားငါးစားတာ၊ အရက်သောက်တာ၊ ဆေးလိပ်သောက်တာ၊ ဆေးငုံတာတွေကြောင့် အနံ့ မကောင်းစေဘူး။ လူဝလို့လည်း ဖြစ်တတ်တယ်။
အစားအစာတွေကိုပါးစပ်ကနေစားသောက်လိုက်ပြီးရင် ကျေချက်ပြီးနောက် သွေးထဲရောက်မယ်။ နောက်မှာ အဆုပ်ကို ရောက်ရာကနေအသက်ရှူထုတ်တော့ ဆိုင်ရာအနံ့ထွက်စေတယ်။ ပါးစပ်ထဲမှာအစားအစာတွေ ကပ်သတ် ကျန်နေရင် ဗက်တီးရီးယားတွေ ပေါက်ဖွါးစေမယ်။ သူတို့ထဲမှာအနံ့ ဆိုးစေတာမျိုးတွေ ရှိတယ်။ ဗက်တီးရီးယားတွေကနေ အဆိပ်လို ဖြစ်လာစေနိုင်တယ်။ ဆေးမကုရင် သွားဖုံးရောမေးရိုးပါ ရောဂါရစေနိုင်တယ်။
ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီတွေ စားရင် Brushing and flossing ပါးစပ်ဆေး၊ သွားတိုက်တာတောင်မှ ခဏတာအနံ့ ဖုံးပေးတာလောက်သာတတ်နိုင်တယ်။ သွားတုတပ်တာနေရာမကျရင်၊ ရိစ် ခေါ် မှိုရောဂါရရင်၊ သွားပိုးစားရင်လည်း အနံ့မကောင်းတာ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ပါးစပ်ခြောက်နေတာဖြစ်လို့လဲ ဖြစ်နိုင်သေးတယ်။
တံတွေးဟာပါးစပ်ကိုသန့်ရှင်းပေးတယ်။ အက်စစ်ဓါတ်ကိုဖြေပေးတယ်။ သေသွားတဲ့ ဆဲလ်တွေကိုလဲရှင်းပေးတယ်။ တံတွေးနည်း-ခြောက်နေရင် အဲလိုကောင်းကျိုးတွေ မဖြစ်စေတော့ဘဲပုပ်နံ့ထွက်လာစေတယ်။ ပါးစပ်ခြောက်နေတာက ဆေးဝါးတွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်တယ်။ တံတွေးထွက်အိတ်တွေ ရောဂါရနေလို့လဲ ဖြစ်စေတယ်။ နူမိုးနီးယား၊ လေပြွန်ရောင်၊ နာတာရှည် ဆိုင်းနပ်စ်ရောဂါ၊ တာရှည်နှာရည်ယိုတာ၊ ဆီးချို၊ အက်စစ်ရည် အထက်ဆန်ရောဂါ၊ အသဲရောဂါနဲ့ ကျောက်ကပ်ရောဂါတွေကြောင့် အာခေါင်ခြောက် နေနိုင်တယ်။
လျှာကိုညစ်ထေးနေတဲ့ ကော်ဇောလိုမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ တင်စားပြောကြတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ခံတွင်းနံ့ မကောင်းတာကို လျှာကြောင့်ဖြစ်ရတာ ၈ဝ-၉ဝ% ရှိတယ်။ လျှာမှာနေတဲ့ ဗက်တီးရီးယားတွေကနေ Malodorous compounds နဲ့ Fatty acids တွေ ဖြစ်လာစေတယ်။ လူတိုင်းမှာရှိနေတဲ့ အဲလိုပိုးတွေက လျှာရဲ့ နောက်ပိုင်းမှာနေကြလို့ သန့်ရှင်းရေးလုပ်တာ မထိရောက်စေဘူး။ နှာရည်ယိုနေတာ၊ အာခေါင် ခြောက်နေတာတွေကြောင့် ပိုဆိုးစေတယ်။ Anaerobic bacteria အမျိုးအစားပိုးတွေကပိုဆိုးစေတယ်။ ကြာတော့ Putrescent smell of indole, Skatole, Polyamines အနံ့တွေ ဒါမှမဟုတ် Rotten egg ဥပုပ်တဲ့အနံ့မျိုးထွက်မယ်။ Volatile sulfur compounds (VSCs) အနံ့မျိုးဖြစ်တယ်။ Hydrogen sulfide, Methyl mercaptan, Allyl methyl sulfide နဲ့ Dimethyl sulfide တွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။ ဒီလိုကြောင့် ဖြစ်သူတွေက Mints, Mouth sprays, Mouthwash တွေ သုံးနိုင်တယ်။ ဒါတွေကနေ အနံ့ဆိုကို ဖုံးပေးတာသာ ဖြစ်တယ်။ လျှာသန့်ရှင်းရေးက ပိုအရေးကြီးတယ်။
ပါးစပ်ထဲမှာဗက်တီးရီးယားအမျိုးအစားပေါင်း ၆ဝဝ ကျော်ရှိတယ်။ အဒီထဲကတချို့တွေကအနံ့ဆိုးထွက်စေအောင် လုပ်နိုင်တယ်။ သူတို့ကနေ ပရိုတင်းတွေကိုချေဖျက်ပြီး အမိုင်နိုအက်စစ်တွေ ထွက်လာမယ်။ ဆက်ပြီး Hydrogen sulfide နဲ့ Methyl mercaptanတွေ ဖြစ်တဲ့ အနံ့ဆိုးဓါတ်ငွေ့တွေ ဖြစ်စေမယ်။
သွားဖုံးရောဂါတွေကြောင့်လဲ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအားလုံးကတော့ လက်မခံပါ။
ဒုတိယလိုက်တယ်။ Sinus ဆိုင်းနပ်စ်ရောဂါ ထိပ်ခပ်နာနဲ့ ပြင်ပ-ပစ္စည်း ဝင်နေတာတွေကနေ ဖြစ်စေမယ်။
အာသီးရောဂါကနေ ဆဲလ်တွေပျက်စီး-သေဆုံးတာတွေကြောင့် အနံ့ဆိုးထွက်နိုင်တယ်။ ၃-၅% မှာဖြစ်တယ်။
အစာမြိုပြွန်မှာ Hiatal Hernia နဲ့ GERD ရောဂါရနေရင်ဖြစ်မယ်။ Zenker's diverticulum ရောဂါ ကနေလဲ ဖြစ်တယ်။
အစာအိမ်ကြောင့် သိပ်မဖြစ်စေတတ်ပါ။ လေချင်တက်တာတော့ ဖြစ်မယ်။
Fetor hepaticusရောဂါ၊ အသက်ရှူလမ်းအောက်ပိုင်းရောဂါတွေ၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါတွေ၊ ကင်ဆာ၊ ဆီးချိုရောဂါ နဲ့ Metabolic dysfunction ရောဂါ၊ လျှာကင်ဆာ၊ လည်ချောင်းကင်ဆာနဲ့ အစာမြိုပြွန်ကင်ဆာတွေ ဖြစ်တယ်။
ခံတွင်းသန့်ရှင်းပါ။ ဖလိုရိုက်ပါတဲ့ သွားတိုက်ဆေးနဲ့ တနေ့ ၂ ကြိမ် သွားတိုက်ပါ။ အစာစားပြီးရင်လဲသွားတိုက်ပါ။ သွားပွတ်တံကို ၂-၃ လ တခါ အသစ်လဲပါ။ Floss ဒါမှမဟုတ် Interdental cleaner သွားကြားသန့်ရှင်းနည်းတနေ့တခါ လုပ်ပါ။ သွားအတုကိုညအချိန် ဖြုတ်ထားပြီးသန့်ရှင်းပေးပါ။ သွားဆရာဝန်နဲ့ ပုံမှန် တနှစ် နှစ်ခါ စစ်ဆေးကုသပါ။ ရေများများသောက်ပါ။ Chewing gum ငုံပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် သကြားမပါတာကိုငုံပါ။ Sucking on candy စုပ်ရတဲ့ အစားအစာမျိုးကနေသွားရည် ပိုထွက်စေတယ်။ သကြားမပါရင် ပိုကောင်းတယ်။
ကြော်ညာပြီးရောင်းနေတဲ့ Mouthwashes ပါးစပ်ဆေးဆေးရည်တွေကိုသတိပြုသုံးပါ။ ခဏလောက်သာ အနံ့ဆိုးကို ဖုံးပေးမယ်။ Astring-O-Sol, Colgate, Dentyl pH, Listerine, Oral-B, Sarakan, Scope နဲ့ Tantumverde တွေ ဖြစ်တယ်။ Oral-B ကို ၂၀၀၉ ကတည်းကရောင်းခွင့်ပိတ်လိုက်ပြီ။ Antiseptic mouth-rinse တွေကပိုးတွေသေစေမယ်။ 3G Mouthwash, All-Fresh, Alna Biotech, Am Pm Mouthwash, Ampm Mouthwash, Angelica Mouthwash, Antiplaque Mouthwash, Antiseptic & Antiplaque Mouthwash, Chlorex Mouthwash, ChlorhexadineGluconate Mouth Wash, Chlorhexidine Mouthwash, C-Nate--ChlorhexidineGluconate, Dysinc Mouthwash, FRESHO Mouthwash, Gumdent Mouthwash, Herbal Mouthwash, Listerine Liquid Mouthwash, Mouthwash (AMPM), Nirmal Mouth Wash, Oral care Flavours and Fragrances, Oraline Mouthwash (Chlorhexidine Mouthwash) နဲ့ Speedent Mouth Wash တွေ ဖြစ်တယ်။
လျှာကိုညင်ညင်သာသာတနေ့ ၂ ခါ သန့်ရှင်းပါ။ လျှာပေါ်က ဗက်တီးရီးယား၊ အစာအကြွင်းအကျံတွေ နဲ့ Mucus အကျိအချွဲတွေကို Tooth brush, Tongue cleaner, Tongue brush/scraper စတဲ့ လျှာဆေးကရိယာသုံးပါ။ ဇွန်းနဲ့လဲလုပ်လို့ ရပါတယ်။ လျှာကိုမခိုက်မိပါစေနဲ့။ လျှာနောက်နားမှာ V-shaped ပုံရှိနေတဲ့ Taste buds အရသာခံအသီး-အဖုလေးတွေကိုမထိခိုက်စေပါနဲ့။ တခုခုစားပြီးတိုင်းပါးစပ် ပလုပ်ကျင်းပါ။ Streptococcus salivarius K12 ဆေး သုံးနိုင်တယ်။ Antibacterial mouthrinses က အကျိုးရှိစေတယ်။ ဗက်တီးရီးယားတွေကိုနိုင်တဲ့ Cetylpyridinium chloride, Chlorhexidine, Zinc gluconate, Essential oils, နဲ့ Chlorine dioxide တွေကိုသုံးတယ်။ တချို့က Odor eliminators အနံ့ကိုနိုင်တဲ့ Oxidizers တွေကိုလဲသုံးတယ်။
ကွမ်းသီးအစို၊ ကွမ်းရွက်နဲ့ ကွမ်းသီးအခြောက်တွေကိုဝါးခိုင်းတယ်။ တချို့က ဒီလိုလုပ်တာ သိပ်ကြာရင် ကင်ဆာ ဖြစ်စေမလား စိုးရိမ်တယ်။ သံပုရာ-ရှောက်သီး၊ လေးညှင်း၊ ဖါလာစေ့၊ စမုန်စပါး၊ ပန်းသီး၊ သွပ်ဓါတ်ပါတဲ့ အစားအစာတွေ၊ ရေနွေးကြမ်း၊ ဆိုဒါ၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုက် တွေကိုသုံးနိုင်တယ်။
သွားခံတွင်းကောင်းနေပေမဲ့ အနံ့မကောင်းသေးရင် တခြားကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရမယ်။ နာတာရှည် ပါးစပ်နဲ့ မကောင်းသူတွေကို ကုရတာခက်တယ်။ တာရှည်ဖြစ်နေရင် သွားဖုံးရောဂါကို ဆက်ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ သွားအပေါ်ဖုံအလွှာ ဖြစ်လာရင် အဲလိုရောဂါ ဖြစ်စေတယ်။ Mouthwashes သုံးပြီး နာတာရှည် ခံတွင်းနံ့ ဆိုးနေတာကိုကောင်းစေတယ်လို့ သုတေသနက သက်သေမပြနိုင်ပါ။ ကိုယ့်ခံတွင်းနံ့ကို သိပ်ကောင်းစေချင်လို့ ဆေးလာကုသူတွေထဲက ကဲသူတွေကို Halitophobia ဆိုတာ Delusion halitosis လို့ ခေါ်တယ်။ အလိုလို ကြာညိုနံ့ သင်းချင်နေသူကိုပြောတာပါ။
Bad mouth ဆိုတာအာဖရိကကလာတဲ့ ကျိန်စာသဘော ဖြစ်ပြီးဒီခေတ်မှာ သူများအပြစ်တင်တာကို ပြောတာဖြစ်တယ်။ ဗမာတွေကတော့ ခံတွင်းနံ့ ကောင်းချင်ရင် မုသားမပြောပါနဲ့တဲ့။
သကြား (သို့) ကင်ဆာဆဲလ်များ၏ လောင်စာ
သုတေသနအသစ်တစ်ခုအရ သကြားပါဝင်မှုများတဲ့ အစားအစာ တွေက ကင်ဆာဆဲလ်တွေ ကြီးထွားဖို့ လောင်စာဆီဖြစ်စေကာ၊ ကင်ဆာ ဆဲလ်တွေပွားများမှုကို များစေတယ် လို့ သိရပါတယ်။ သုတေသီတွေရဲ့ တွေ့ရှိချက်အရ အဆုတ်၊ ဦးခေါင်းနဲ့ လည်ပင်း၊ အစာရေမျိုနဲ့ သားအိမ် ခေါင်းတွေမှာ ဖြစ်ပွားတတ်တဲ့ (squamous cell carcinoma) ကင်ဆာအမျိုးအစားက သကြား အပေါ် များစွာမှီတည်တယ်လို့ သိရ ပါတယ်။ University of Teras မှ သုတေသီတွေရဲ့ တွေ့ရှိချက်အရ ကင်ဆာအများစုက သကြားအပေါ် မှီတည်ပေမဲ့ squamous cell carcinoma ကင်ဆာဆဲလ်ကတော့ သိသိသာသာ ပိုပြီး မှီတည်နေတယ်လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် SqCC ကင်ဆာဆဲလ်တွေမှာ Glucase transporter 1 ပရိုတင်း (GLUT 1) ပမာဏ သိသိသာသာ မြင့်မား တက်ကြွနေပြီး ယင်းပရိုတင်းက သကြားက အဓိကရတဲ့ ဂလူးကို့စ် တွေကို ဆဲလ်အတွင်းသို့ ပို့ဆောင်ရာ မှာ လုပ်ဆောင်ပေးပြီး အထဲရောက် သွားတဲ့ ဂလူးကိုစ့်တွေကို ကင်ဆာ ဆဲလ်တွေက စွမ်းအင်အဖြစ် သုံးစွဲ ကာ ဆဲလ်ဇီဝဖြစ်စဉ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ဆဲလ်တွေ ပွားများကြီးထွားဖို့ ကူညီ ပေးပါတယ်။
ဒါကြောင့် သုတေသီတွေက သကြားစားသုံးမှုက ဆီးချိုသွေးချို ရောဂါ၊ အ၀လွန်ရောဂါတွေသာမက တချို့ ကင်ဆာရောဂါတွေကို ပိုများ စေပါတယ်လို့ သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ သုတေသနအတွက် သုတေသီတွေက non- small cell lung cancer (အဆုတ်ကင်ဆာတစ်မျိုး) ရဲ့ အဓိက မျိုးကွဲနှစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ adeno carcinoma (ADC) နဲ့ sqCC ရဲ့ မတူညီတဲ့ ဇီဝဖြစ်ပျက်မှုပုံစံကို သုတေသနလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သုတေသီတွေက GLUT 1 ဆန့်ကျင် ပစ္စည်းရဲ့ သက်ရောက်မှုကို လူသား တွေရဲ့ အဆုတ်တစ်သျှူးအပေါ်မှာ ကင်ဆာနှစ်မျိုးလုံးနဲ့ စမ်းသပ်ခဲ့ပါ တယ်။ ရလဒ်ကတော့ sqcc ကင်ဆာ ဆဲလ်တွေက GLUT 1 ဆန့်ကျင် ပစ္စည်းနဲ့ တွေတဲ့အခါ တဖြည်းဖြည်း ဆုတ်ယုတ်လာပြီး ADC ကင်ဆာ ဆဲလ်တွေကတော့ တုန့်ပြန်မှုမရှိတာ တွေ့ရပါတယ်။ SqCC ကင်ဆာဆဲလ် တွေ ကြီးထွားမှု နှေးလာတာဖြစ်ပြီး၊ လုံးဝပျောက်ကင်းသွားတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အားလုံးခြုံကြည့်ရရင် တော့ ကင်ဆာရောဂါ အထူးသဖြင့် SqCC အမျိုးအစားတွေအတွက် GLUT 1 က အဓိကပစ်မှတ်ဖြစ် လာနိုင်ခြေရှိတယ်လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
တစ်ကြိမ်တည်းနဲ့အမြစ်ဖြတ်မဲ့ ငှက်ဖျားရောဂါ ကုသဆေး
ငှက်ဖျားရောဂါဟာ ခြင်မှ တဆင့် ကူးဆက်ပြန့်ပွားတဲ့ရောဂါ ဖြစ်ပြီး အနောဖလိစ်ခြင်မမှတဆင့် ပြန့်ပွားပါတယ်။ လီဗာပူးလ်အပူပိုင်း ဒေသ ရောဂါများဆေးကျောင်းမှ သုတေသနအဖွဲ့က ငှက်ဖျားရောဂါ အတွက် တစ်ကြိမ်တည်းသောက်ရန် လိုအပ်တဲ့ဆေးကို ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ တယ်လို့ Nature communications ဂျာနယ်မှာ ပုံနှိပ်ဖော်ပြခဲ့ပါ တယ်။
ယင်းနိုင်ငံပေါင်းစုံအဖွဲ့မှ ငှက်ဖျားရောဂါပျောက်ဆေး များ အတွက် အဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ မော်လီကျ; E209 ကို တွေ့ရှိခဲ့ပါ တယ်။ ယင်းမော်လီကျူးက ပထမဆုံး ဓာတုပစ္စည်းများမှတဆင့် ထုတ်လုပ် တဲ့ တစ်ကြိမ်တည်း သောက်ရုံနဲ့ ပျောက်ကင်းနိုင်တဲ့ ငှက်ဖျားရောဂါ ပျောက်ဆေး ဖြစ်နိုင်ခြေများလျက်ရှိပါ တယ်။ ယင်းမောလီကျူးက ငှက်ဖျား ရောဂါဖြစ်စေတဲ့ ပါရာဆိုက်ရဲ့ အာတီမီဆနင် (ငှက်ဖျားကုသ ဆေး) ဆေးယဉ်ပါးဗီဇ ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ အပိုင်းကို ထိထိရောက်ရောက် တိုက် ခိုက်နိုင်တယ်လို့ သုတေသနလုပ်စဉ် တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ငှက်ဖျားရောဂါကို ထိန်းချုပ်အဆုံးသတ်ဖို့အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ ကုသရေးဗျူဟာတွေ လိုအပ်နေခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်း အတော်ကြာအထိ အာတီမစ်ဆနင် ဆေး အခြေပြုဆေးပေါင်းများကို အသုံးပြုပြီး ငှက်ဖျားရောဂါကို အံတု ခဲ့ပါတယ်။
Semi-Synthetics (ဓာတု ပစ္စည်းတစ်ဝက်- သဘာဝပစ္စည်း တစ်ဝက်) ဖြင့် ဖော်စပ်ထားသော ဆေးပေါင်းတွေက ငှက်ဖျားကုသမှု အပေါ် ကြီးမားတဲ့ အကျိုးသက် ရောက်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လုံးဝဓာတုပစ္စည်းချည်းသုံးပြီး ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ငှက်ဖျားကုသဆေး ကိုတော့ ရှာဖွေဆဲဖြစ်ပြီး ဆယ်စုနှစ် တစ်စုကျော် ကြာခဲ့ပါတယ်။ ယင်း ကာလအတွင်း တစတစ ကြီးထွား လာတဲ့ ပြဿနာကတော့ လက်ရှိသုံး စွဲနေတဲ့ ဆေးပေါင်းတွေကို ယဉ်ပါး လာပြီး၊ ကုသမှုကျရှုံးခန်းဆီ ဦးတည် လာတာပါပဲ။ ယင်းအတွက်ကြောင့်ပဲ သုတေသီတွေက ပါရာဆိုက်ရဲ့ ဆေး ယဉ်ပါးမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ ဗီဇဖြစ် ပေါ်မှုကို အဓိကတိုက်ခိုက်ပေးနိုင်ပြီး အာနိသင်လည်း မြန်မြန်ရမဲ့နည်း လမ်းကို ရှာဖွေခဲ့ကြပါတယ်။ မော်လီ ကျူး သုတေသနကို နက်နက်နဲနဲ လုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ လက်ရှိ ဆေး အာတီမစ်ဆနင်ကို ယဉ်ပါးစေမှု ဖြစ်စေတဲ့ K 13 ဗီဇကို တွေ့ခဲ့ကြ ပါတယ်။ E 209 က K13 ဗီဇပြောင်း လဲနေတဲ့ ပါရာဆိုက်တွေကို တိုက် ခိုက်နိုင်ရုံသာမက အာတီမစ်ဆနင် ဆေးရဲ့ ဖျက်ဆီးနိုင်စွမ်းကိုလည်း မနှောင့်ယှက်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် သုတေသီတွေက E 209 ဟာ ဒုတိယမျိုးဆက် ပါအောက်ဆိုဒ် အခြေပြုဆေးဖြစ်ပြီး လက်ရှိ အကောင်းဆုံး အာတီဆူးနိတ်ကုထုံး ထက် ထူးထူးခြားခြား ပိုပြီး သက် ရောက်မှုကောင်းစေတယ်လို့ ဆိုခဲ့ပါ တယ်။
လူတစ်ဦးမှတစ်ဦးသို့ ရောဂါကူးစက်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲ ကျန်းမာရေးနှင့် မညီညွတ်သော အစားအစာများ စားသောက်ခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်သော လူမှုဘ၀နေထိုင်မှုပုံစံများတွင် ကြာရှည်စွာ စားသောက်နေထိုင် ထိတွေ့နေရခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ရောဂါအစုအဝေးကို ခေါ်ပါသည်။
မကူးစက်နိုင်သောရောဂါများတွင် အောက်ပါရောဂါနှင့် ကျန်းမာရေးပြဿနာများ ပါဝင်ပါသည်။
(၆) နာတာရှည်အဆုတ်ပွရောဂါ၊ လေပြွန်ကျဉ်းနှင့် ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါ
(၁၀) မတော်တဆဖြစ်ခြင်းနှင့် ထိခိုက်မှုအန္တရာယ်
(၁၃) မူးယစ်ဆေးဝါးအန္တရာယ် (၁၄) မြွေကိုက်အန္တရာယ်တို့ ပါဝင်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် သေဆုံးသူ (၁၀၀)လျှင် (၅၉)ဦးသည် မကူးစက်နိုင်သောရောဂါများကြောင့် သေဆုံးနေကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အဖြစ်များသော နာတာရှည်ရောဂါ (၄) မျိုးရှိပါသည်။
(၁) ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်စွာ စားသုံးပါ။
• ချိုလွန်း၊ ငန်လွန်း၊ အဆီများလွန်းသော၊ အသင့်စားထုတ်ပိုးထားသော အစားအစာများကို လျှော့၍စားသုံးပါ။
• ချိုလွန်းသည့်အစားအစာများမှာ - အချိုရည်များ၊ သကြားနှင့်နို့ဆီပါသော အစားအစာများ၊ ထန်းလျက်၊ မလိုင်၊ ကြံသကာ စသည့် အစားအစာများ
• ငန်လွန်းသည့် အစားအစာများမှာ - ငါးပိ၊ ငါးခြောက်၊ ငံပြာရည်၊ ပုစွန်ခြောက်စသည့် အစားအစာများနှင့် ဟင်းချိုမှုန့်
• တိရိစ္ဆာန်မှ ရသောအဆီများ (အမဲဆီ၊ ၀က်ဆီ) စားသုံးခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ပါ။ စားအုန်းဆီကို အလွန် အကျွံမစားသုံးသင့်ပါ။
• ကွမ်းစားခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
• အမျှင်ဓါတ်ပါသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် သစ်သီးဝလံများကို များများစားသုံးပေးပါ။
• ကန်စွန်းရွက်၊ ချဉ်ပေါင်ရွက်၊ ဘူးရွက်နှင့် ဘူးသီး၊ ဟင်းနုနယ်ရွက်စသည့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ
• ငှက်ပျောသီး၊ သင်္ဘောသီး၊ ဖရဲသီး၊ သရက်သီး၊ မာလကာသီး၊ စပျစ်သီးစသည့် သစ်သီးဝလံများ
(၂) ကိုယ်ကာယ လှုပ်ရှားမှု လေ့ကျင့်ခန်းများ မှန်မှန်ပြုလုပ်ပါ။
• တစ်နေ့လျှင် မိနစ်(၃၀) ၊ တစ်ပတ်လျှင် (၅)ရက် သင့်လျော်သော ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်ပါ၊ (လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ရေကူးခြင်း၊ အလေးမခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်း စသည့် မိမိလုပ်နိုင်သည့် လေ့ကျင့်ခန်းကို လုပ်နိုင်ပါသည်။)
• သွက်လက်တက်ကြွစွာ နေထိုင်ပါ။
• အထိုင်များခြင်း လှုပ်ရှားမှုနည်းခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
• တီဗီ၊ တီဗီဂိမ်းရှေ့တွင် ကြာရှည်စွာထိုင်ခြင်းနှင့် ကွန်ပျူတာ၊ အင်တာနက် ဆက်တိုက်ကြာရှည်စွာ အသုံးပြုခြင်းများ ရှောင်ကြဉ်ပါ။
(၃) ဆေးလိပ်နှင့်ဆေးရွက်ကြီးသုံးစွဲမှုကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
• ကိုယ်တိုင်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့် သူတစ်ပါးဆေးလိပ်ငွေ့ရှုခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
• ဆေးရွက်ကြီးနှင့် နှပ်ဆေးအမျိုးမျိုးပါဝင်သော ကွမ်းစားခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
• ဆေးငုံခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
(၄) အရက်အလွန်အကျွံသောက်သုံးမှုကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
(၅) ကိုယ်ခန္ဓာရှိသင့်သည်ထက် ပိုဝမလာအောင် ထိန်းသိမ်းပါ။
• မိမိအရပ်အလိုက် ရှိသင့်သော ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်နှင့်
• ကိုယ်အလေးချိန်များလာလျှင် လျှော့ချရန် ကြိုးစားပါ။
(၆) ရေလုံလောက်စွာ သောက်ပါ။
လူတစ်ယောက်သည် ရေကို တစ်နေ့လျှင်ရေဖန်ခွက် (၈)ခွက် (သို့) (၂)လီတာ ခန့်သောက်သုံးရန် လိုအပ်ပါသည်။
(၇) စိတ်သောကများကို လျှော့နိုင်အောင်ကြိုးစားနေထိုင်ပါ။
• အပြုသဘောဖြင့် အရာရာကို အကောင်းမြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။
• အပြုံးဖြင့် လောကဓံကို ကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။
• မကူးစက်နိုင်သောရောဂါများအား ကာကွယ်ရန် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော နေထိုင်စားသောက်မှု အလေ့အထများကို လိုက်နာကျင့်သုံးသင့်ပါသည်။
• အသက်(၄၀)ကျော်သူများအနေဖြင့် ဆီးချိုသွေးချိုနှင့် သွေးတိုးရောဂါများ ဖြစ်ပွားနေမှု ရှိ/မရှိ ပုံမှန် စစ်ဆေးသင့်ပါသည်။
• ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို သိရှိပါက ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းနှင့် ဆောလျင်စွာပြသ၍ ပုံမှန်စစ်ဆေးကုသမှု ခံယူသင့်ပါသည်။
ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုစေသော ပြုံးရယ်ခြင်း
သွေးခုန်နှုန်းမြင့်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေး ခြင်း
ပြုံးခြင်းက နှလုံးခုန်နှုန်းကို နှေးစေပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကို အနားရစေ သည်။ သို့ဖြစ်၍ နှလုံးက လှုပ်ရှားမှု လုပ်ငန်းစဉ်များက ၀န်ပိခြင်း မဖြစ် စေပါ။ ပြုံးရယ်နေသောလူများအနေ နှင့် နှလုံးရောဂါဖြစ်နှုန်း နည်းစေ သည်။ ပြုံးခြင်းသည်လည်း ယာယီ အားဖြင့် နှလုံးဖိအားကို လျော့ကျစေ သည်။
တစ်နေ့တာ အပြုံးကို ဆောင် ခြင်းဖြင့် စိတ်ပင်ပန်းမှုကို လျော့ချပေး နိုင်သည်။ ပြုံးခြင်းဖြင် stress homones များကို ဖျက်ဆီးလျော့ချ ပေးသည့် endorphins ကို ရရှိစေ သည်။
Endorphinsm စိတ်အားကို တက်စေသည့်အပြင် စိတ်ဖိစီးမှုကို ထိန်းချုပ်ဟန့်တားပေးစေနိုင်သည်။ အစ ပထမ၌ ပကတိအပြုံးကို ဖန်တီးဖို့ရန်မှာ မလွယ်ကူလှသည့် တိုင်အောင် တဖြည်းဖြည်း အချိန် နှင့် အမျှ ကျင့်သားရပြီး ရိုးရှင်း၊ လွတ်လပ်လွယ်ကူစွာ အပြုံးကို ဖန်တီးလာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ပြုံးခြင်းသည် သဘာဝကျကျ မျက်နှာကို ပင့်တင်သကဲ့သို့ ဖြစ်စေပြီး လေ့လာချက်အရ (၃) နှစ်ပို၍ ငယ် သွားသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
သဘာဝဆေးတစ်လက်အဖြစ် နာကျင်ကိုက်ခဲမှုကို သက်သာစေ သည်။
လူအချင်းချင်း ဆက်ဆံရေး တိုးတက်စေရန် ]]အပြုံး}} သည် အဓိကကျလှသည်။ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး အပြုံးဖလှယ်ပြီး မိတ်ဆွေများ တိုးစေသည်။ သို့ဖြစ်၍ မိမိနှင့် တပါးသူ၏စိတ်ကို လန်းဆန်းစေ သော အပြုံးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ; ''A smile can brighten someone's day" ဟုသောစကား ထွက်ပေါ်လာ သည်။
လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ တွေ့ရှိရတဲ့ ကိုလက်စထရော (အဆီ) တွေက အရင်းအမြစ်နှစ်မျိုးကနေ ရရှိပါ တယ်။ တစ်မျိုးက ခန္ဓာကိုယ်က သဘာဝအတိုင်း ထုတ်လုပ်ပေးတာ ဖြစ်ပြီး၊ နောက်တစ်ခုကတော့ ကျွန်တော်တို့ စားသုံးလိုက်တဲ့ အစားအသောက်တွေကတဆင့် ရရှိ တာဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း ကိုလက်စထ ရောတွေက အဆုတ်ကို ဖုံးအုပ်ထား တဲ့ အဆုတ်အမြှေးပါးပေါ် သိသာတဲ့ သက်ရောက်မှုတွေကို ဖြစ်လာစေပါ တယ်။ ယင်း အချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွီဒင်ရှိ Lund University မှ သုတေသီတွေက သွေးတွင်း အဆီ ပမဏရဲ့ အဆုတ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် မှုအပေါ် သက်ရောက်ပုံကို လေ့လာခဲ့ ကြပါတယ်။ အဆုတ်မှာ အောက်ဆီ ဂျင်နဲ့ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် လဲလှယ်မှုဖြစ်ပွားတဲ့ နေရာကို alveoli (လေအိတ်) လို့ခေါ်ပါ တယ်။
ယခုသုတေသနမှာ လေအိတ် (alveoli) လေးတွေကို ကာကွယ်ပေး ထားတဲ့ ပရိုတင်းအလွှာပါး အဆုတ် မြှေး (Surfactant) အကြောင်းကို အထူးပြု လေ့လာထားပါတယ်။ ယင်း ပရိုတင်းအလွှာပါးလေးက alveoli လေးတွေကို ကာကွယ်ပေးရုံသာမက ပဲ သွေးကြောထဲက ဓာတ်ငွေ့အမျိုးမျိုး လဲလှယ်မှုအပေါ်လည်း သက်ရောက် မှုရှိစေပါတယ်။ အဆုတ်အမြှေးပါး၊ (Surfactant) ဖြစ်ပေါ်လာရာမှာ ကိုလက်စထရောက သဘာဝပါဝင် ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လမစေ့ပဲ မွေးတဲ့ကလေးတွေမှာတော့ အဆုတ် အမြှေးပါးမှာ ကိုလက်စထရောက မပါသလောက်နီးပါးပါပဲ။ လမစေ့ပဲ မွေးတဲ့ကတွေမှာ alveoli (လေ အိတ်) လေးတွေကို ကာကွယ် ပေးထားဖို့ အဆုတ်အမြှေးပါး (surfactant) ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ အချိန် မရပါဘူး။
ယင်းကလေးတွေကို ကုသရာ မှာ ၀က်ရဲ့အဆုတ်ကတဆင့် ထုတ် လုပ်ထားတဲ့ အဆုတ်အမြှေးပါး အထောက်အကူပြု ဆေးထိုးပေးတဲ့ အခါမှာလည်း အရေးပေါ်အခြေ အနေမှာ ရလဒ်တွေကောင်းခဲ့ပေမဲ့ ရေရှည်မှာတော့ အဆုတ်ကို အကြီး အကျယ် ပျက်စီးမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာ စေပါတယ်။ ယခု သုတေသနမှာ သုတေသီတွေက နယူကလိယ သံလိုက်လှိုင်းနည်းပညာ (NMR technology) ကို အသုံးပြုပြီး အဆုတ်အမြှေးပါးပေါ် ကိုလက်စထ ရောရဲ့ သက်ရောက်ပုံကို စစ်ဆေးခဲ့ပါ တယ်။ ယင်းနည်းပညာ အသုံးပြုပြီး ရှာဖွေမှုအရ ကိုလက်စထရောပါတာ နဲ့ မပါတာအပေါ် မူတည်ပြီး မော်လီကျူးတည်ဆောက်ပုံ အသစ် တွေဖြစ်ပေါ်လာတာကို တွေ့ရပါ တယ်။ မော်လီကျူးတည်ဆောက်ပုံ တွေ မတူညီတာနဲ့အမျှ အဆုတ် အမြှေးပါးရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပုံက လည်း လုံးဝကွဲပြားတာကို တွေ့ရပါ တယ်။
အထူးသဖြင့် ဓာတ်ငွေ့တွေ လဲလှယ်ရာမှာနဲ့ အဆုတ်လေအိတ် လေးတွေကို ကာကွယ်ပေးတဲ့အပိုင်း တွေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သုတေသိတွေအနေနဲ့ ကိုလက်စထ ရောရဲ့ အဆုတ်လေအိတ်လေးတွေ အပေါ် သက်ရောက်ပုံကို တွေ့ရှိမှု အား အခြေခံပြီး ကုထုံးသစ်တွေ ထွက်ပေါ်လာနိုင်ဖို့ သုတေသနတွေ ဆက်လုပ်သွားသင့်တယ်လို့ အကြံပြု ထားပါတယ်။
Syphilis Treatment ဆစ်ဖလစ်အတွက်ဆေးများ
၁။ ဆရာ မင်္ဂလာပါ။ သူငယ်ချင်းတယောက်က ကာလသားရောဂါနဲ့ ပိုးသတ်ဆေးသုံးကြိမ်ထိုးခိုင်းတာကို တကြိမ်သာ ထိုးပါသည်။ ငွေကြေးမတတ်နိုင်သောကြောင့်။ ရောဂါပိုး ရှိနိုင် မရှိနိုင် သိချင်ပါသည်။
အရင်ကတော့ ကာလသားရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးကနေ ဆေးစစ် ဆေးကုတာ အခမဲ့လုပ်ပေးတာရှိတယ်။
၂။ ဆရာရှင့် Syphilis ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးချင်ပါတယ်ရှင့်။ သမီးအသက် ၃၀ ပါရှင့်။ အိမ်ထောင်ရှိပါတယ်ရှင့်။ သမီးသွေးစစ်လိုက်တဲ့အခါမှာ ကာလသားရောဂါပိုးတွေ့ရှိတယ်ပြောလို့ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်နဲ့ Penicillin ဆေး ၃ ပတ် ထိုးပြီးပါပြီရှင့်။ ရောဂါပျောက်ကင်းအောင် နောက်ထပ်ဆေးထိုးဆေးသောက် ဆက်လုပ်ဖို့လိုသေးလားရှင့်။ လမ်းညွှန်ပေးပါအုံးရှင့်။ ပြီးတော့ သမီးတို့က ကလေးယူချင်နေတာဆိုတော့ ခုချိန်မှာ ကလေးယူလို့ရောရပါမလားရှင့်။ ဘယ်ချိန်ထိစောင့်ပြီးမှယူလို့ရမလဲရှင့်။ ဒီရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီး အရမ်းစိတ်သောကရောက်နေလို့ပါရှင့်။
၃။ မင်္ဂလာပါဆရာ။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သတ်လို့ အနည်းငယ်သိလိုတာလေး မေးပါရစေခင်ဗျာ။ အသက် ၂၃ နှစ်ပါ။ ယောက်ျားလေးပါဆရာ။ 2016/1လပိုင်းမှာ အလုပ်ကိစ္စတခုနဲ့ သွေးစစ်တော့ vdrl positive 2Dilution တွေ့ရတယ်ဆရာ။ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာ စစ်တာပါ။ အဒါနဲ့ ဆေးရုံက ပင်နီဆလင်ဆိုတာထိုးပေးပါတယ်။ နောက် ၃ လနေရင် ပြန်စစ်ပါတဲ့ခင်ဗျ။ အဲတာနဲ့ ၃ လနေစစ်တော့ 8 ဖြစ်နေပါတယ်ဆရာ။ အမျိုးသမီးကိစ္စ ဘာမမရှိပါဘူးဆရာ။ ဒါနဲ့ ဆေးရုံက အန်ရိုသာမင်း 500 mg ဆေးပေးပါတယ်ဆရာ။ ရလဒ်ကောင်းပါတယ်။ ပထမတလစစ်တော့ ၄ နောက်လစစ်တော့ ၂ နောက်လ စစ်တော့ dil မရှိတော့ဘူးပြောပါတယ် ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်က တလတခါပုံမှန်စစ်နေကျဆိုတော့ နောက်လ ထပ်စစ်တော့4ပြန်ရောက်နေပြန်ကော။ အဲတာအခု Doxycycline 14 ရက် တရက်2ကြိမ်သောက်ခိုင်းထားပါတယ်။ ပြည်ပထွက်အလုပ်လုပ်ဖို့က အဲတာဆေးစစ်တာမအောင်လို့ဆရာ အချိန်ဘယ်လောက်ကြာမှ nonreactive ဖြစ်မှာလည်း သိပါရစေခင်ဗျာ။ ပြီးတော့ ဘယ်လိုနေထိုင်းမလည်း သိပါရစေခင်ဗျာ။
ပဌမအဆင့်၊ ဒုတိယအဆင့်၊ တတိယအစောပိုင်းအဆင့် ဆစ်ဖလစ်အတွက်ဆေးများ
• Benzathine penicillin G 2.4 million units inasingle IM injection တလုံးထဲထိုးပါ။ ဒါမှမဟုတ် တပတ် ၁ လုံး၊ ၃ ပတ်ထိုးပါ။ ဒါမှမဟုတ် Procaine penicillin G 2-4 million units IM ၁ဝ-၁၄ ရက်ထိုးပါ။
• ပနယ်စလင်မဆတည့်ရင် Doxycycline 100 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၁၄ ရက်သောက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် Tetracycline 500 mg တနေ့ ၄ ကြိမ်၊ ၁၄ ရက်သောက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် Erythromycin 500 mg တနေ့ ၄ ကြိမ်၊ ၁၄ ရက်သောက်ပါ။
ဦးနှောက်-အာရုံကြော ဆစ်ဖလစ် အတွက်ဆေးများ
• Benzathine penicillin G 2.4 million units တပတ် ၁ လုံး၊ ၃ ပတ်ထိုးပါ။ ဒါမှမဟုတ်
• Crystalline Penicillin G 3-4 million units IV4hourly x 10-14 days ဒါမှမဟုတ်
• Procaine penicillin 2.4 million units IM တနေ့ ၁ လုံးထိုးပါ။ ဒါ့အပြင် Probenecid 500 mg ကို တနေ့ ၄ ခါသောက်ပါ။ ၁ဝ-၁၄ ရက်ကြာမယ်။ ဒါမှမဟုတ်
• Chloramphenicol2Gm daily x 30 days, Doxycycline 200 mg BD x 21 days and Ceftriaxone 1 Gm daily x 14 days
• ဆစ်ဖလစ် ပဌမအဆင့်ရှိသူနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက် ၉ဝ အတွင်း လိင်ဆက်ဆံဘက်တိုင်း ဆစ်ဖလစ် ရှိ-မရှိ စစ်ပါ။ လိုအပ်ရင် တပြိုင်တည်း ကုသမှုခံယူပါ။
• ဆစ်ဖလစ် ဒုတိယအဆင့် ရှိသူနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၆ လအတွင်း လိင်ဆက်ဆံဘက်တိုင်း ဆစ်ဖလစ် ရှိ-မရှိ စစ်ပါ။ လိုအပ်ရင် တပြိုင်တည်း ကုသမှုခံယူပါ။
• ဆစ်ဖလစ် ဆတိယအဆင့် ရှိသူနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၁ နှစ်အတွင်း လိင်ဆက်ဆံဘက်တိုင်း ဆစ်ဖလစ် ရှိ-မရှိ စစ်ပါ။ လိုအပ်ရင် တပြိုင်တည်း ကုသမှုခံယူပါ။
• HIV + Syphilis တွဲနေရင် နောက်ဆေးတွေလိုသေးတယ်။ (၂) ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေကို အထက်ကနည်းအတိုင်း ပေးရမယ်။
• ဆစ်ဖလစ် စောစောပိုင်းအဆင့် = Penicillin G တလုံးထဲ IM ထိုးပါ။ ပနယ်စလင် မတည့်သူကို Doxycycline နဲ့ Tetracycline ပေးပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေရင် မပေးသင့်ပါ။ Ceftriaxone ကိုပါ သုံးနိုင်တယ်။
• ဆစ်ဖလစ် နောက်ပိုင်းအဆင့် = Neurosyphilis အာရုံကြော-ဆစ်ဖလစ်၊ Penicillin IV အကြောဆေး ၁ဝ ရက် ထိုးပါ။ ပနယ်စလင် မတည့်သူကို Ceftriaxone ပေးပါ။ ဒါမှမဟုတ် Penicillin G ကို တပတ်တခါ ၃ ပတ်ထိုးပါ။ မတည့်ရင် Doxycycline ဒါမှမဟုတ် Tetracycline သုံးပါ။
• ဆစ်ဖလစ် စောစောပိုင်းအဆင့်အတွက် ၂ဝ၁ဝ သုတေသနတခုမှာ Azithromycin 2-g ပါးစပ်ကနေ တခါတည်း ပေးတာဟာ 2.4-MU Penicillin G Benzathine 2.4-MU ထိုးတာနဲ့ ယှဉ်ကြည့်တယ်။ ထိရောက်တယ်လို့ ဆုံးဖြတ်တယ်။ လူနာမှာ HIV မရှိမှ ထိရောက်မယ်။ ၆ လနေရင် သွေးထဲ ပိုးကင်း-မကင်းစစ်တာ ဒီကုသနည်း ၂ ခု မကွာပါ။
• Penicillin ပနယ်စလင်နဲ့ မတည့်သူတွေအတွက် = ဆစ်ဖလစ် ပဌမအဆင့် နဲ့ ဒုတိယအဆင့်တွေအတွက် Tetracycline, Erythromycin နဲ့ Ceftriaxone တွေကို ပေးတယ်။ အရင်က Doxycycline နဲ့ Tetracycline တွေကို သုံးနေခဲ့တယ်။ အခု ၂ဝ၁ဝ မှာ CDC guidelines အရ Ceftriaxone ၁ဝ-၁၄ ရက်ပေးတာ ဆစ်ဖလစ် အစောပိုင်းဖြစ်တာအတွက် ထိရောက်တာ တွေ့ရတယ်။
• CDC 2010 ရဲ့ STD လိင်ကတဆင့်ကူးစက်ရောဂါ ဆေးလမ်းညွှန်မှာလဲ ထိရောက်တယ်လို့ ဆိုထားတယ်။ တချို့ ဆေးယဉ်တာလဲတွေ့ရတယ်။ ဒါကြောင့် ပနယ်စလင် နဲ့ Doxycycline သုံးမဖြစ်မှသာ Azithromycin ကို ပေးသင့်တယ်။ လိင်တူဆက်ဆံသူတွေနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေကိုတော့ Azithromycin မပေးသင့်ပါ။
ဆေးကုသမှုရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး Jarisch-Herxheimer reaction ဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်။ ဆေးပေးကာစ ၁ နာရီကနေ တရက်အတွင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ကိုယ်ပူမယ်၊ ခေါင်းကိုက်မယ်၊ ရင်ခုန်မြန်မယ်။ ချမ်းမယ်၊ အနီပြင်ထွက်မယ်။ ကြွက်သားတွေ နာမယ်။ Aspirin, NSAIDs အနာ-အကိုက်သက်သာဆေးပေးနိုင်တယ်။ (အလာဂျီ) ဖြစ်ရင် Benedryl ပေးနိုင်တယ်။
Syphilis ဆစ်ဖလစ် (ပနယ်စလင်မတည့်သူ)
Doxycycline (ဒေါက်ဆီဆိုက်ကလင်း) နဲ့ Tetracycline (တက်ထရာဆိုက်ကလင်း) တွေကို အရင်ကတည်းက သုံးနေတယ်။ Erythromycin (အရစ်သရိုမိုင်စင်) နဲ့ ceftriaxone (ဆက်ဖ်ထရိုင်ယာဇုန်း) ဆေးတွေကိုလည်းသုံးနိုင်တယ်။ Azithromycin (အဇစ်သရိုမိုင်စင်) ကိုလည်း လေ့လာတယ်။ ၂ဝဝ၈ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ထိရောက်တယ်။ ၂ဝ၁ဝ မှာလည်း HIV လည်းမရှိသူ အဆင့် (၁) ဆစ်လေစ်ကို ထိရောက်တာတွေ့ရတယ်။ ဆေးပေးပြီးနောက် ၆ လမှာ သွေးပြန်စစ်တော့ အဓိကဆေးတွေပေးတာနဲ့ မထူးတာတွေ့ရတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ဆေးယဉ်လာတာလည်း တွေ့လာရတယ်။ (ပနယ်စလင်) နဲ့ (ဒေါက်ဆီဆိုက်ကလင်း) မရမှသာပေးသင့်တယ်။ ဒါပေမယ့် (ဂေး) တွေနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆစ်ဖလစ်တွေမှာတော့ ဒီဆေးနဲ့ မတိုးပါ။
- Doxycycline 100 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၁၄ ရက်။
- Tetracycline 500 mg တနေ့ ၄ ကြိမ်၊ ၁၄ ရက်။
- Erythromycin (အရစ်သရိုမိုင်စင်) 500 mg တနေ့ ၄ ကြိမ်၊ ၁၄ ရက်။
- Doxycycline 100 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၃ဝ ရက်။
- Tetracycline 500 mg တနေ့ ၄ ကြိမ်၊ ၃ဝ ရက်။
- Erythromycin 500 mg တနေ့ ၄ ကြိမ်၊ ၃ဝ ရက်။
Heart Attack နှလုံးအတက် သတင်း
ရုတ်တရက် နှလုံးရောဂါဖောက်လာခြင်း Heart Attack ဟာ များသောအားဖြင့် အဟာရ ချို့တဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အစားအစာတွေကို စားနေပေမယ့်လည်း အဟာရဓါတ် မပြည့်ဝတဲ့ အစားအစာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် နှလုံးရောဂါ ဖောက်လာတဲ့အခါ နှလုံးပုံမှန် အလုပ်ပြန်လုပ်ဖို့ အတွက် တစ်ကယ့်အစာအဟာရကဲ့သို့ စွမ်းဆောင်နိုင်မယ့်အရာကို ချက်ခြင်း ပံ့ပိုးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒေါက်တာ ဂျွန်ခရစ္စတိုဖာက သူ့ရဲ့လုပ်သက် ၃၅ နှစ်လုံးလုံး Heart Attack လူနာတွေကို ဖော်ပြပါနည်းနဲ့ ကယ်တင်ခဲ့ ရာမှာ အားလုံးအသက်ရှင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ နည်းလမ်းကတော့ ရေနွေးကြမ်းပူပူ တစ်ခွက်ထဲကို ငရုပ်သီးအစိမ်းမှုန့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တဇွန်းစာ ထည့်ရောမွှေပြီး လူနာကို တိုက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ လူနာဟာ တစ်မိနစ်အတွင်းမှာ ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရေနွေးကြမ်းပူပူက ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ဆဲလ်တွေကိုဖွင့်ပေးတဲ့အချိန်မှာ ငရုတ်သီးအစိမ်းမှုန့်ရဲ့ စွမ်းအားက တွန်းပို့တဲ့အတွက် နှလုံးကို တိုက်ရိုက်ထိရောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါနည်းလမ်းဟာ သောက်ဆေးတွေ ထက်တောင် တုံ့ပြန်မှုက ပိုမိုမြန်ဆန်ပါတယ်။ ယခုနည်းလမ်းကို သိထားခြင်းဖြင့် Heart Attack လူနာတွေရဲ့အသက်ကို သေချာပေါက် ချက်ချင်း ကယ်တင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်က ရေးထားတာတိုင်းကို ဝေဘန်ဆန်းစစ်တာ လုပ်လေ့မရှိပါ။ သတင်းဆိုရင်တော့ ဆန်းစစ်တာလိုအပ်ရင်သာ လုပ်ပါတယ်။ အခုပို့စ်က သတင်းထင်ပါတယ်။ မဟုတ်လောက်တာတွေပါနေတယ်။
Heart Attack ခေါ် နှလုံးရောဂါဖောက်လာခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတွေကို အရင်သိရပါမယ်။ ကိုရိုနရီ ခေါ် နှလုံးသွားသွေးလွှတ်ကြော တနေရာမှာ ပိတ်ဆိုလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီသွေးလွှတ်ကြောလေးတွေက ကျဉ်းနေမှသာ အဲလိုဖြစ်တယ်။ ကျဉ်းစေတဲ့အကြောင်းက သွေးလွှတ်ကြောလေးတွေအတွင်းထဲမှာ ပလိပ်ခေါ် အလွှာဖြစ်နေလို့။ အဲတာက ကိုလက်စထောခေါ် ကျန်းမာရေးနဲ့ မသင့်တဲ့အဆီဓါတ် သွေးထဲမှာ များနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဲလိုဖြစ်ရင် နှလုံးသွား သွေးလွှတ်ကြောတနေရာရာမှာ သွေးခဲပြီး ပိတ်ချက်တဲ့နေရာကို သွားပိတ်တယ်။ အဲတာကို နှလုံး အတက်ရတယ်လို့ ခေါ်တယ်။ ဒီနည်းကနေဖြစ်တာက အများဆုံး။
ဒုတိယနည်းကတော့ နှလုံးသွားသွေးလွှကြော တုန်ခါမှုကနေဖြစ်တယ်။ ဖြစ်ရင် သွေးဆက်မလျှောက်နိုင်တော့ပါ။ မူးယစ်ဆေးတချို့ကနေ အဲလိုဖြစ်စေနိုင်တယ်။
ဘယ်လိုလူတွေမှာ နှလုံး အတက်ဖြစ်နိုင်သလဲ
၁။ ယောက်ျား အသက် ၄၅ နှစ်။ မိန်းမ အသက် ၅၅ နှစ်ကျော်သူတွေ။
၄။ မကောင်းတဲ့ ကိုလက်စထော များနေသူတွေ။
၆။ မိသားစုအတွင်း အဲလိုဖြစ်ဖူးသူတွေ။
၇။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု နည်းသူတွေ။
၁၁။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သွေးတက်ရောဂါရသူတွေ။
၁၂။ အော်တိုအင်မြူး ခေါ် ခုခံအားကမောက်ကမရောဂါတခုခု (ရူမက်တစ်အဆစ်နာ၊ လူးပတ်စ်ရောဂါ) ရှိသူတွေ။
သတင်းထဲမှာရေးထားသလို အဟာရဓါတ်မပြည့်ဝတဲ့ အစားအစာတွေဆိုတာ အတော်ကို ယေဘုယျကျတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ အစားအသောက်နဲ့ဆိုင်တာ ကိုလက်စထောကို ထည့်မပြောလို့မဖြစ်ပါ။ စနစ်တကျကုသနည်း ရေးထားပါတယ်။ ငရုပ်သီးအကြောင်းလည်း ရေးထားပါတယ်။ ငရုပ်သီးဈေးကောင်းစေချင်လို့ ရေးတာလား မသိပါ။
Acute Heart Attack Treatment ရုတ်တရက် နှလုံး အတက် ရရင် ဘာလုပ်ရမလဲ http://doctortintswe.blogspot.com/2017/01/cute-heart-attack-treatment.html
Heart attack vaccine နှလုံးရောဂါ ကာကွယ်ဆေးကို အိန္ဒိယမှာ စမ်းသပ်ရန်ရှိ http://doctortintswe.blogspot.com/2017/01/heart-attack-vaccine.html
သက်လတ်ပိုင်းအရွယ်တို့ ဆံပင်၊ အသားအရေထိန်းသိမ်းမှု
ဤအသက်အပိုင်းအခြားတွင် ဆံပင်မကြာခဏ လျှော်ခြင်း၊ ခေါင်း လျှော်ရေအမြောက်အများ သုံးခြင်းကို ရှောင်ပါ။ အကယ်၍ မကြာခဏ ခေါင်းလျှော်မိပါက ခေါင်းလျှော်ရေ အစား၊ ပျော့ဆေး (သို့) ပေါင်းဆေးကို သုံးပါ။ ခေါင်းလျှော်ရည်ကိုလည်း sulfate နည်း သောအမျိုးအစားကိုသာ တစ်ပတ် (၁) ကြိမ်သုံးပါ။ ဆံပင်ကို dryer နှင့် အခြောက်ခံခြင်းထက် ရေစင် အောင်သုတ်၍ သဘာဝအတိုင်း အခြောက်ခံပါ။ သို့မှသာ ဆံပင်ခြောက်တတ်သော ပြဿနာကို လျော့ချနိုင်မည်။
ယခုလိုသက်လတ်ပိုင်းအရွယ်တွင် နေကာမျက်မှန် ကို နေပူနေ၍ ဖြစ်စေ၊ လေတိုက်၍ဖြစ်စေ တပ် ထားပါ။ moisturing မျက်စဉ်းကို ခပ်ပေးပါ။ မိနစ် (၂၀) ရောက်တိုင်း Computer Break ခေါ် ကွန်ပျူတာ ကုလားထိုင်သည် ကွန်ပျူတာထက် အနည်းငယ် မြင့်ပြီး ကွန်ပျူတာကို အထက်စီးမှ အနည်းငယ်ကြည့်သကဲ့သို့ ဖြစ်မည်။ မိမိမျက်ခွံက မျက်လုံးကို အနည်းငယ်ကာထား သလို ဖြစ်ရမည်။ သို့မှသာ လေထုကြောင့် မျက်လုံး ခြောက်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်မည်။
မျက်လုံးတ၀ိုက် eye gel ကို လက်သူကြွယ်နှင့် စန္ဒရားတီးသကဲ့သို့ အသာအယာတို့လိမ်းပေးပါ။ ပွတ် လိမ်းခြင်းရှောင်ပါ။ သို့မှသာ အသား ထဲသို့ စိမ်းဝင်မည်။
အသက်အရွယ်နှင့်လိုက်ဖက်သော product ကို သုံးပါ။ သို့မှသာ အသားအရေစိုပြေနိုင်မည်။ အသား မာနှင့် အရေပြားများခြောက်ကြမ်း၍ ကွာခြင်းတို့အတွက် ချေးချွတ်ဆေး အပျော့စားကိုသုံးပြီး SPF 50 ပါသော အစိုဓာတ်ထိန်းခရင်ကိုလိမ်းပါ။ မိတ်ကပ်မလိမ်းမီ မျက်နှာ tissue များအတွက် အုန်းဆီ (သို့) သံလွင်ဆီစစ်စစ်ကို လိမ်းပေးပါ။ နေ့အချိန် အေးသောရာသီမျိုး၌ moisturizer ခရင်ကို သွားလေရာ ဘူးကလေးနှင့် ထည့်သွင်းပြီး လိမ်းပေးပါ။
သံလွင်ဆီစစ်စစ်က အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ရေချိုးစဉ် တကိုယ်လုံးကို သကြားအဖြူနှင့် ချေးချွတ် ပေးပါ။ ရေချိုးပြီး ခန္ဓာကိုယ်ရေမခြောက်မီ သံလွင်ဆီကို တကိုယ်လုံးလိမ်းပေးပါ။ ရနံ့ကြိုက်သူက လာဗင်ဒါဆီကို သုံးပေးပါ။ ချောမွတ်သော အသားအရေကို ရရှိပေမည်။
လက်သည်း၊ ခြေသည်းများမှ ပန်းခုံးနေရာများကိုပါ မကျန် သံလွင်ဆီကို လိမ်းပေးပါ။ ခြောက်သွေ့သော ခြေလက်မျိုးကို NlVEA ကဲ့သို့ ခရင်လိမ်း၍ အပေါ်မှ သံလွင်ဆီလိမ်းပေးပါ။
ခန္ဓာကိုယ်ဝိတ်လျော့ခြင်းအတွက် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်
- မုန်လာဥနီ၊ ဂရိတ်ဖရုနှင့် အခြား အမျှဓာတ်ပါသော အသီးများစား ခြင်းဖြင့် အ၀လွန်ခြင်းကို တားဆီးနိုင် မည်။
- လမ်းလျှောက်၊ ရေကူး၊ အနှေးပြေး၊ ပြေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် မလို လားအပ်သော အဆီများကို လောင် ကျွမ်းစေသည်။
- အနီရောင်အစားအစာများ၊ အဖြူ ရောင်အစားအစာများက ခန္ဓာကိုယ်မှ လိုအပ်သော ပရိုတိန်းဓာတ်ကို ပေး စွမ်းနိုင်မည်။
- ခန္ဓာကိုယ်ဝိတ်ချသောအချိန်တွင် လုံလောက်စွာအိပ်ခြင်းဖြင့် အားအင် ကုန်ခမ်းခြင်းကို ကာကွယ်ပါ။
- ဆား၊ အငံဓာတ်ကို လျော့စားပါ။
- ဆီကြော်များကိုရှောင်၍ ပြုတ်ထား သောအစားအစာများကိုစားပါ။
- တစ်နေ့လျှင် ရေ (၈) ခွက်မှ (၁၀) ခွက် သောက်ပေးပါ။
- လူအတော်များများသည် အ၀မ လွန်စေရန် နံနက်စာကို ရှောင်စားကြ သည်။ အမှန်စင်စစ် ဤနည်းသည် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ ရေအလေးချိန် Water weight ကို တိုးစေပြီး ၀ိတ် တတ်စေသည်။ သို့ဖြစ်၍ နံနက်စာကို ရှောင်မစားပါနှင့်။
- carbonated နှင့် သကြားများသော အချိုရည်များကို မသောက်ပါနှင့်။
- သဘာဝနှင့် ဆန့်ကျင်သောဆေး ပြားများ၊ ၀မ်းနှုတ်ဆေးများကိုသုံး၍ ကိုယ်အလေးချိန် အမြန်ကျအောင် မလုပ်ပါနှင့်။
- ညစာအ၀အပြဲစားခြင်းကို ရှောင် ပါ။ ယင်းသို့စားခြင်းသည် ပေါင်နှင့် ဗိုက်တွင် အဆီများစုပြီး အ၀လွန်စေ သည်။
- လိုသည်ထက်ပို၍ စားခြင်း၊ လျော့ ၍ စားခြင်း မပြုလုပ်ရပါ။ နေ့စဉ် စားသုံးသည့် ကယ်လိုရီပမာဏကို ကျန်းမာကြံ့ခိုင်မှုနှင့် သင့်တော်စေရန် သတိမူပါ။
- နို့နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းများသည် ၀ိတ် တက်စေသောကြောင့် cottage cheese မလိုင်၊ ထောပတ်တို့ကို မစားပါနှင့်။
မျှတ ကစား အသိဖြင့် စား
ကိုယ်ခန္ဓာဝိတ်တက်ခြင်းကို အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးများပါ အသက်အားဖြင့် ၃၀ ကျော်စ လူလတ်ပိုင်းအရွယ်တွင် ကိုယ်ခန္ဓာဝိတ်တက်လာခြင်း သိသာဖြစ်ပေါ်လာကြပါသည် ။ အမျိုးသမီးများတွင် ကိုယ်တွင်း အဆီသိုလှောင်မှု့ ပိုမိုများပြားခြင်းကြောင့် အမျိုးသားတွေထက် အမျိုးသမီးများ ပိုမို ဝိတ်တက် ဝဖြိုးလာတက်ပါသည် ။ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ် မတူညီခြင်းကြောင့် အမျိုးသမီးများမှာ အမျိုးသားများထက် ကိုယ်အလေးချိန် ဝိတ်များရခြင်း ဖြစ်ပါသည် ။ အရပ်အမောင်းအနေအထားအရ ညီမျှစွာဝဖြိုးမှု့ ဖြစ်ပေမဲ့ တစ်ချို့ တွင် သိသိသာသာ အဆီများဝိတ်တက်စွာ လေးလံတက်ကြပါသည်။ ဝဖြိုးခြင်းအတွက် စိတ်စောလျင်စွာ မိမိနေ့ စဉ်လိုအပ်နေသော ဗီတာမင်ဓာတ်များနှင့် အဟာရဖြစ်ရန်တွက် စားသောက်ရမည်များကို အလေးမမှု စွာဖြင့် စားသောက်မဲ့ နည်းပါစွာ လုပ်ဆောင်ကြတက်သလို့ တစ်ချို့ ဆိုလျှင် အဆီကျဆေး ပိန်ဆေး ဆိုပြီး ဆေးများသောက်ခြင်း ဌင်းအဆီကျဆေးများကို လရှည်သုံးစွဲခြင်း၊ တစ်ချိုတွေမှာ မိမိခန္ဓာကိုယ်မှ အဆီများထုတ်ယူခြင်းဖြင့် ပိန်အောင် လှအောင် အဆီကျအောင်ဆိုပြီး လုပ်ဆောင်ကြတာတွေလည်း ရှိကြပါတယ် ။ ထိုကဲ့သို ပိတ်ဆေးသောက်သုံးခြင်း အဆီထုတ် ဆောင်ချက်များတို့တွင် မိမိကျန်းမာရေးအတွက် နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ပေါ်စေသည့်ကို အထူးသတိချပ်သင့်ပါသည် ။
ကိုယ်အလေးချိန် ဝိတ်မတက်အောင် ဦးစွာထိန်းပြီးမှ ကျဆင်းဖို့အတွက် ဒုတ်ိယအနေဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါ ။ နေ့စဉ်စားသောက်သည့်အခါတွင် အသီးအနှံ ဟင်းသီးဟင်းရွက် သုံးမျိုးလောက် ပါအောင်စားလျှင် ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး လက်ဖက်ရည်၊ ကော်ဖီ၊ နို့ဆီ၊ နွားနို့၊ သကြားလုံး၊ ချောကလက်၊ ထန်းလျက်နဲ့ လုပ်တဲ့ မုန့်မျိုးစုံ၊ အချိုရည်မျိုးစုံကို လျှော့ခါစားပါ။ အဆီစိမ့်များသော ထောပတ်၊ မလိုင် နို့ဆီများဖြင့် ပါဝင်ပြု့လုပ်ထားသော မုန့် အမျိုးမျိုးရှောင်ပါ။ ဆီကြော်မုန့်များလည်း ရှောင်ပါ ။
ဝိတ်ချခြင်းအကောင်းဆုံးတစ်ခုမှာ ကယ်လုိရီများသော အစားအစာများကို အထူးလျှော့ခါ စားသုံးခြင်းဖြစ်ပြီး ဌင်းနှင့် အတူ အဆီပါဝင်သောအစားကိုပါ ရှောင်ရှားပြီး ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်း တစ်ခုကို ပုံမှန်ဆောင်ရွက်လုပ်ဆောင်ခြင်းသာဖြစ်ပါသည် ။ စိတ်စောစွာဖြင့် လေ့ကျင့်ခန်းများ ပြင်းထန်းစွာ လုပ်ဆောင်ခြင်း အပြု့ အမှု ကို မလုပ်ဆောင်သင့်ပါ ပုံမှန်အနေအထားဖြင့် လုပ်ဆောင်ပါ ။ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးများတွင် လစဉ်ရာသီလာပြီးနောက်ရက်များတွင် မိမိလုပ်ဆောင်နေသော အားကစားကို သက်သောက်သက်သာအနေဖြင့် ကစားသင့်ပါသည် ။ ရာသီလာပြီးသည့်အခါတွင် အမျိုးသမီးများမှာ အရိုးသိပ်သည်းဆ လျော့နည်းခြင်းကြောင့် အရိုးနှင့် ပတ်သက်သည့် အောင့်ခြင်း အဆစ်များ နာကျင်ကိုက်ခဲးတက်ခြင်း ရောင်ရမ်းခြင်းအဖြစ် ခံစားမှု့ သိသိသာသာဖြစ်ပေါ်စေတက်ပါသည် ။
မိမိကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းစေရန် အားကစားများကို လုပ်ဆောင်သူများအနေဖြင့် ကြွက်သားများ နာကျင်ခြင်းသက်သာအောင် ရေများများ သောက်ပေးပါ ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်သော ရေကိုသောက်ခြင်းကြောင့် အဆီချေဖျက်ရန်အတွက်ပါ လွယ်ကူစေပါသည် ။ ချွေးထွက်များခြင်းကြောင့် မူးနောက်ခြင်း မဖြစ်စေရန် ဓာတ်ဆားဖျော်ရည် သို့ မဟုတ် သီးစုံဖျော်ရည် ကို သောက်ပေးပါ ။
မိမိနေ့ စဉ်စားသည့် ထမင်းကို စားသည့်အခါတိုင်း တစ်ဝက်ခန့် လျော့ချ စားပေးပါ ။ သင့်တင့်စွာ မစားသောက်ပါက စားသောက်သော အစားအစာတွေက ပိုလျှံတဲ့ကစီဓာတ်တွေကို ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းအဆီအဖြစ် သို့ ပြောင်းလဲ သိုလှောင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
လေ့ကျင့်ခန်းပြု့လုပ်ပြီး စားသောက်ခြင်းကို ထိန်းသိမ်း စားသောက်ရှောင်ရှားခြင်း မရှိပါက ကျသွားသည့် အဆီများပြန်လည်တက်လာခါ ပိုမိုဝဖြိုးလာနိုင်ပါသည်။
ရာသီပေါ် အသီးအနှံများ စားသောက်ခြင်း ဖျော်ရည်အဖြစ် သောက်ခြင်း ၊ ဟင်းအလျာဖြင့် ချက်ပြုတ်စားသောက်ခြင်းတို့ သည့် မိမိခန္ဓာအတွက် လိုအပ်သော အဟာရဓာတ်များကို ဖြည့်တင်းပေးရုံမက ဝဖြိုးခြင်း အဖြစ်ပါ ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါသည် ။
အသက်အရွယ်အရ ဝဖြိုးမှု့ ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် အစားသောက်များကို ချင့်ချိန်ခါ စားသောက်ပါ ။ ပုံမှန် ကျန်းမာရေး လေ့ကျင့်ခန်း တစ်ခုခုကို လုပ်ဆောင်ပါ ။ အချုပ်ပြောရရင်ဖြင့် ကျား မ မရွေး ( စားခါအသိ … လေ့ကျင့်ပါတွဲ… ကျန်းမာညီစွာ … ဝဖြိုးထိန်းပါ . . သင့်ခန္ဓာ ) ဟု ဆိုချင်ပါသည်။
သွားနှင့် ခံတွင်း ကျန်းမာခြင်း
မိမိ၏သွားခံတွင် သွားများ သွားဖုံးများ နှင့် သွားခံအတွင်းရှိ မေးရိုးကြွက်သားနှင့် နာဗ့်ကြောများ ကောင်းမွန်နေချိန်တွင် နေ့ စဉ်စားသောက်ဝါးနေပေမဲ့ ကျန်းမာကောင်းမွန်နေခြင်းကြောင့် စားကောင်းခြင်းနှင့်အတူ နာကျင်ခံစားခြင်းလည်းကင်းဝေးစွာ စားသောက်နိုင်ကြပါသည် ။
သွားခံတွင်းရှိ သွားမကောင်းခြင်း ၊ သွားပိုးစားခြင်းနှင့် သွားဖုံးများ မကောင်းခြင်းတို့ ချိုးတဲ့လာပါက အစားသောက်ဝါးသည့်အခါ စားသည့်အခါတွင် နာကျင်ခံစားခြင်းများဖြစ်ပေါ်လာတက်ပါသည် ။ ဌင်း ခံတွင်း ကျန်းမာခြင်း အားနည်းလာခြင်းကြောင့် နာကျင်လာပါက နားထင်တွေ ကိုက်ခဲးလာခြင်း ၊ ခေါင်းမကြည့်ခြင်း ၊ မျက်ကြောများ ကိုက်ခဲးလာခြင်းအတူ နာကျင်ဝေဒနာများစွာခံစားဖြစ်ပေါ်လာပါသည် ။
သွားပိုးစားခြင်းကို ကလေးအငယ်များတွင် ဖြစ်များမှု့ များပြားပြီး အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာသည့်အခါတွင် သွားဖုံးနှင့် ပတ်သက်သော ရောဂါများပိုမိုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည် ။ နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့် သွားဖုံးကျန်းမာရေး အားနည်းလာခြင်းကြောင့် သွားများနှုတ်ပစ်ရခြင်း သွားများကျိုးလွယ်ပြီး မိမိသွားများ ဆုံးရှုံးစေနိုင်ပါသည် ။
သွားခံတွင်းကျန်းမာမှု့ အားနည်း ဝေဒနာများဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြင်းများအချို့ မှာ အဟာရဓာတ်ချိုးတဲ့ခြင်း ၊ တစ်ဖက်တည်းကိုသာ ကြိတ်ခါဝါးစားတက်ခြင်း ၊ မျိုးရိုးလိုက်ခြင်းနှင့် ဆီးချိုးဝေဒနာဖြစ်သူများဖြစ်ပါသည် ။
မိမိသွားခံတွင်းအတွက် ကောင်းမွန်စေရန် အလေ့အကျင့်များဖြင့် ကြိုတင်ကာကွယ်သင့်ပါသည် ။
မနက်တစ်ကြိမ် ညတစ်ကြိမ် သွားတိုက်သန့် ရှင်းခြင်း (သွားတိုက်ပြီးပါက သွားတိုက်ဆေးများ ကုန်စင်အောင်ပလုပ်မကျင်းပါက ဖလိုရိုက်ပါဝင်သောကြောင့် သွားပိုးစားမဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် ပိုကောင်းစေပါသည် ) ၊
ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးများသည့် အစာအစားများကို ညီညွတ်မျှစွာ စားသုံးခြင်း ၊
အစာအစားစားသောက်ပြီးတိုင်း ရေဖြင့် စားကြွင်းအကျန်များ ကင်းစင်အောင်ထိ ပလုပ်ကျင်းခြင်း ၊
သွားကြားအတွင်ညပ်နေသောအစာများကို သွားကြားထိုးတံသုံးခြင်းအစား သွားပွတ်ကြိုးဖြင့် ရှင်းလင်းဖယ်ရှာခြင်း ၊
ဆေးလိပ်သောက်ပါက ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကို လျှော့ချခြင်း ၊
အအေးလွန်သောရေများ သောက်သုံးခြင်း နှင့်အချိုလွန်ကဲသော အအေးများ ဖျော်ရည်များ သောက်သုံးခြင်းကို ရှောင်ရှာခြင်း ၊
သွားဖုံများ ကောင်းမွန်စေရန် ဆားအနည်းငယ်ထည့်ထားသော ရေနွေးကို ခဏတာငုံပေးထားပြီး ပလုပ်​ကျင်းခါ ပြန်​​ထွေးထုတ်​​ပေးခြင်း၊
အချိုရည် သကြားများသော အရည်များကို ခံတွင်းတွင် မြုံပြီး အချိန်ကြာကြာထားခါ သောက်သုံးတက်ခြင်းကို ရှောင်ရှာခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည် ။
မိမိစားသုံးသည့် အစာအစားကြောင့် နှင့် သွားဖုံရောင်ရမ်းခြင်း သွားဖုံးကြွခြင်းကြောင့် နာကျင်ခံစားဖြစ်ပေါ်လာပါက နာကျင်နေသည့် နေရာများကို လျှာဖြင့်ထိုး​ခြင်းမလုပ်ရပါ ။​​ခဏခဏလျှာဖြင့်ထိုးခြင်းမျိုးကြောင့် ရောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်နေသည့်အတွက် ဌင်းနေ၇ာ ပိုးဝင်ခါ သွားဖုံးပြည်တည်ခြင်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်အတွက်ဖြစ်ပါသည် ။
နာကျင်သက်သာစေနိုင်သည်မှာ ရေနွေးဖြင့် ငုံခါ ပလုပ်ကျင်းကျင်းပေးခြင်း ပြု့ လုပ်ပါက နာကျင် သက်သာ ပျောက်ကင်းစေပါသည် ။
မိမိသွားတွင် သွားပိုးစားနေခြင်းကြောင့် သွားပေါက်နေရာတွင် အစာစားပြီး တိုင်း အစားများဝင်ခါ ခဏခဏ နာကျင်ဖြစ်ပေါ်နေပြီး သွားပိုးပေါက်ကို သတိထားလာမိလာပါက သွားဘက်ဆိုင်ရာတွင် ကြိုတင်စစ်ဆေးပြီး ကုသမှု့ ခံယူသင့်ပါသည်။